Fitsaharana miaraka amin'i Ubuntu | Avy amin'ny Linux
Fitsaharana miaraka amin'i Ubuntu
Zironid | | GNU / Linux
Fotoana kely lasa izay dia nieritreritra momba ny fomba nanafihan'ny sasany taminay an'i Ubuntu aho. Mitaraina izahay satria manao an'io, satria tsy manao an'io. Raha tsy tiantsika izany dia anjarantsika izany ary manan-jo hitaraina isika, saingy tokony hanaja azy isika. Fa maninona aho no milaza an'izany? EFA maro amintsika no nanomboka tamin'ny GNU / Linux niaraka tamin'ny Ubuntu, na tiantsika na tsia, ary angamba raha tsy nisy izany dia tsy ho fantatsika ny Linux (ny tranga misy ahy ohatra).
Mety tianay kokoa ny distro ampiasaintsika ankehitriny (mazava ho azy, raha tsy mampiasa Ubuntu ¬¬) isika, saingy mieritreritra aho fa tokony hampidina kely ilay fanafihana.
Mbola tadidinao ve ny fotoana nanombohanao ny Linux tamin'ny PC-nao? Oviana ianao no niditra ny baiko voalohany tamina tsipika terminal / shell / command? Tamin'ny fotoana voalohany tsy maintsy namerenanao indray tamin'ny fametrahana ny tananao tamin'ny toerana tsy nilalaovany?.
Eny, tsy tiako ny làlan'ny Ubuntu, saingy manana fanajana / fitiavana azy aho noho ny fidirako ho any amin'ny tontolo mahafinaritra an'ny Linux, noho ny fianarany zavatra maro rehefa nampiasako izany ary noho ny fisaorana azy no nihaonako olona maro miaraka amin'ny zavatra tiako sy mahaliana ahy.
Làlana feno mankany amin'ny lahatsoratra: Avy amin'ny Linux » GNU / Linux » Fitsaharana miaraka amin'i Ubuntu
178 hevitra, avelao ny anao
Ny zavatra niainako voalohany dia tsy dia tsara loatra 🙁 raiko, tonga tao an-tsainy ny nanome ahy Slackware ho distro voalohany, hahaha tamin'ny olona arivo napetraka dia tsapako fa tsy maintsy manome "startx" aho hanombohana ilay x, noheveriko fa rehefa nanomboka tao amin'ny console dia nametraka diso izy hahahaha. (Nostalgia). Andro izay tsy hiverina intsony.
Ny rainao dia tsy mahalala fomba xD Slackware ho distro voalohany! Somary manahirana ny fizarana, na dia hitako tsara be aza izany 🙂 Raha tsy hoe ho lany fotoana tsy ho ela aho hanangonana (fomba fametrahana izay tiako kokoa noho ny mimari-droa) dia tohizako io. 😉
Noho ny fahalianana te hahafanta-javatra, misy zavatra tazominao ve?
Mahay manabe ny rainao, tiako ny dadako nanome ahy Linux distro efa ela
Manaiky tanteraka, tsy mifanaraka amin'ny làlana entin'i ubuntu aho, na izany aza dia ny fizarana ampiasaiko ihany =)
Mila mahita ireo famoahana manaraka.
Hisy foana ny olona hanafika azy, satria tian'ny ambadika azy, ka rehefa mahita troll mitaraina momba an'i Ubuntu ianao dia Closet Ubuntero io!
Hehehehe, marina XD
Hahahahaha, tsara xD
Ubuntu ho an'ny mases !!!
Manaiky anao tanteraka aho hehe!
Rafa Chavez dia hoy izy:
Nanomboka tamin'ny Ubuntu aho ary nanohy nampiasa azy io, nanandrana distros hafa toa ny debian miaraka amin'ny KDE na Gnome Shell aho, fa nijanona niaraka tamin'i Ubuntu ihany aho.
Toa tsy ratsy amiko ny lalana nalehan'i Ubuntu, manandrana 13.04 aho ary haingana kokoa noho ny teo aloha. Tsapako ihany koa fa birao maro no tavela tao amin'ilay Windows teo aloha.
Valiny tamin'i Rafa Chávez
Heveriko ihany koa izany. Ny Ubuntu dia mivoatra sahala amin'ny teknolojia, ary ireo distros izay tsy mieritreritra, tsy mino ny lalan-kaleha izy ireo, ny fiovana sy ny fivoarana dia tsara, misaotra fa isika izao.
Ny fanovana mihitsy no tsara.
Amin'ny fomba ahoana Victor, aiza no ahitanao ny kisary Unity eo akaikin'i Ubuntu?
Salama Filomatika, eken'ny pejy ny sary masina (na izany no heveriko); fantaro fa naneho hevitra aho tamin'ny alàlan'ny ubuntu miaraka amin'ny firaisankina do raha toa ka ataonao ihany koa izany ary tsy mahazo sary masina ianao, mety ho noho ny antony tsy fantany hoe mampiasa ianao.
Misaotra tamin'ny hevitrao. fiarahabana
Fantatro fa tsy ny maro amintsika no maniry ny Ubuntu, fa tsy isalasalana fa mpampiasa an'arivony (raha tsy an'aliny) ny mpampiasa vaovao ao amin'ny tontolo mahafinaritra an'ny GNU / Linux. Ho an'ity sy kely kokoa dia manaja azy aho. Ary iza koa aho no mandehandeha manompa ny distro na hafa rehefa laniko mandehandeha xD Distro-hopper par excéliciement izany. Na dia tsy maintsy milamina aza ny lohako ary mamela rafitra marin-toerana noho ny antony fampandrosoana ny thesis sy ny hafa.
Misy tolo-kevitra momba ny rafitra matanjaka iray izay tohanan'ny Texlive? Minimum ho an'ny taona raikitra 🙂
Debian stable? XD. Mandreraka be ity zavatra Distro-hopping ity, izaho (toa) efa nandao an'io "sehatra" io. Andao hojerentsika izay mitranga.
Nieritreritra an'izany aho! Saingy tsy haiko na hiandry ny famotsorana an'i Debian 7 ary noho izany Jessie ho Testing (izay noeritreretiko hapetraka). Tsy maintsy miandry isika vao hahita izay mitranga 😀
Tsy haiko hoe inona no atao hoe distro hopper, fa tamin'ny taon-dasa dia nampiasa distro 6 hafa farafahakeliny iray volana aho.
Ankehitriny mampiasa Arch aho, tsy haiko ny manazava azy, mahatsapa fiadanam-po lehibe amin'ity distro ity aho toy ny hoe iray tamiko.
Lehilahy miharihary, ilay fitiavana mampatahotra!
Toy izany koa no nitranga tamiko 5 taona lasa izay rehefa hitako ny The Arch Way sy ny tsy misy kilema Arch Linux.
Nandeha ny fotoana, androany aho dimy taona, manana asa hafa aho ary tsy manam-potoana firy hanokana ny antsipiriany kely isaky ny zoro maizina amin'ny rafitrako ka nifindra tany Chakra aho izay tena mampino: ny minimalista, miasa ary "SysAdmins to Power!" amin'ny distro tsy azo simba, antsasaky ny RR, KDE ary miorina eo amboniny sary kanto mahafinaritra.
Ary rehefa teraka ho toy ny fork of Arch ary mitazona ny fotokevitra ary ny ankamaroan'ny firafiny, ny PKGBUILDs dia mitovy (na dia nihatsara, ohatra, ny screenshot = () saha) ka ny ankamaroan'ny fonosana Arch dia napetraka saika tsy misy mikasika azy ireo ao Chakra.
Raha fintinina, rendrarendra, atolotry ny olona rehetra izay tia fanangonana ny rafitr'izy ireo minimalist amin'ny tanana, mitandrina ny antsipiriany rehetra, tsindraindray ary misy ny fametrahana Linux Arch izay naharitra 3 sy 1/2 taona niaraka tamin'ny fanovana glibc , systemd, filesystems ary zavatra kely hafa ary niasa foana izy io, tena mafy orina ary marin-toerana ary haingana be.
Matetika rehefa tsy mahomby ny rafitra iray dia azo inoana fa ny lesoka dia eo anelanelan'ny monitor sy ny seza 😀 😀
Saika ny distro rehetra dia misy Texlive ao amin'ny trano fitehirizan'izy ireo. Ao amin'ny Ubuntu sy ny derivatives dia ampy ny mametraka Texmaker (na kile) ka saika hapetraka daholo izay rehetra mifandraika amin'ny LaTeX). Mikasika ny fitoniana dia heveriko fa ny zavatra tsara indrindra tokony hatao dia ny mametraka an'i Debian.
Saulot dia hoy izy:
Salama, hitako tokoa fa voatafika be ny ubuntu. Na dia nanomboka nampiasa satroka mena 6 aza aho dia mampiasa ubuntu aho amin'izao satria mampiasa azy io any am-piasana ary mora kokoa amiko ny mitazona azy io amin'ny dingana vitsivitsy monja. Na izany na tsy izany, heveriko fa tsy tokony hotafihina ny distro manokana, satria amin'ny farany ny tontolon'ny GNU / Linux dia mandray anjara amin'ny antony.
Valio i Saolaot
Ny ankamaroany angamba dia niaina izany tamin'ny G / L voalohany. Na izany aza, na dia nisaotra ny rahalahiko aza aho- dia nanararaotra nahita An'alika tamin'ny tsato-kazo USB, tonga tao amin'ny Ubuntu ihany koa aho, noho ny fampiroboroboana lehibe nahazo azy.
Tsy manana ady amin'ny Ubuntu aho, ary tsy hanana izany intsony aho izao. Io no distro voalohany napetraky ny tanako, ny hadisoako voalohany ary ny tsy tiako ... ny fitiavana voalohany tao amin'ny G / L. Ny tombony azon'ny G / L dia ny tsirairay mandray ny làlana heverin'izy ireo fa mety ary mahavita tsy misy ado intsony, Ubuntu no manao azy, na tsara na ratsy io no lalan'izy ireo.
Marina tanteraka ianao eto amin'izao tontolo izao, nanomboka tamin'ny Ubuntu aho, ao amin'ny kinova 11.04, ary satria ireo mpamily karatra sary dia tsy napetraka ho default, ny zavatra hitako voalohany dia ny tsy firaisankina, fa ny gnome tsara tarehy 2, aorian'ny fametrahana ireo mpanera, Nanandrana firaisankina aho ary tsy tiako, ary nifikitra tamin'ny gnome 2-ko.
Tsy tiako intsony ny Ubuntu, raha ny marina, tsara dia tsara fa misy distro kendrena ho an'ireo mpampiasa vao, saingy, ankehitriny, tsy dia tiako loatra intsony i Ubuntu, nanomboka tamin'ny 11.04 dia very be ... na dia tsy manohitra an'i Ubuntu aza aho , raha tsy Canonical, fa tsy milaza zavatra ***** na zavatra mitovy amin'izany ny Ubuntu, mametra ny tenako tsy hampiasa azy aho ary raha mitsikera zavatra tsy tiako, fa amin'ny fanabeazana, izay inona no tsy azony?
Mazava ho azy fa tsy misy Ubuntu, tsy ho fantatro ny Gnu / Linux, raha toa ka mampivadi-po ny fiovana avy amin'ny Windows mankany Ubuntu (zatra ny interface Windows miverimberina), raha toa ka tsy sarotra kokoa ny Ubuntu dia ho lafo izany. betsaka kokoa Misaotra an'i Ubuntu, zakaina kokoa ny fiovana.
Ny zavatra iray tsy tiako dia ny alohan'ny nametrahako ny Ubuntu amin'ny solosaiko findainy, ary nandeha tsara izany, apetrako izao ary tena miadana izy, noho ny "Unity", mbola misy karazany hafa toa ny "Xubuntu", izay avelan'izy ireo ho ahy (ny solosaina finday ho an'ny reniko, ary vaovao amin'ny siansa informatika amin'ny ankapobeny izy).
Teboka iray hafa hanasongadinana ny hoe nividy PC birao vaovao aho, mahery vaika ary samy Ubuntu, ary ireo izay nalaina avy tamin'ny Ubuntu (Mint, OS tsotra, Pear Os ...) dia tsy mandeha, na amin'ny milina virtoaly aza, mametraka aho izany, ary rehefa manandrana "mitendry" kely toy ny fanokafana ny tranokala ary mampiasa azy mandritra ny minitra vitsy aho dia mahazo tty amin'ny hadisoana marobe, saingy nivaingana, tsy afaka nanoratra na inona na inona ary nanery ahy hamerina ny solosaina toy ny helo, izay tsy mbola nisy toa ahy hatramin'ny nialako tao Windows, izany no mitranga amiko na amin'ny Ubuntu na amin'ny derivatives rehetra.
Amin'izao fotoana izao, rehefa avy nanandrana distro hafa toa an'i Arch (izay tena tsara) dia mampiasa an'i Debian Gnu / Linux aho, izay tena ahazoako aina.
nametraka * bibikely matavy izy ireo, miala tsiny
Izaho dia iray amin'ireo izay nanomboka tamin'ny Ubuntu, na ny tena marina, tsy nanomboka tamin'ny Ubuntu aho, nanomboka tamin'i Debian aho, saingy noho ny Ubuntu sy ireo CD maimaim-poana no fantatro fa misy zavatra hafa ankoatran'ny Windows.
Na dia tsy manana zavatra manohitra an'i Ubuntu manokana aza aho dia heveriko fa ny zava-mitranga amin'ny ankamaroantsika dia manelingelina antsika fa io no fizarana malaza indrindra, ny fizarana izay nanjary fantatra ny GNU / Linux ary ny fiovana tsirairay (ho tsara kokoa na ho an'ny ratsy kokoa), izy ireo dia misy fiatraikany amin'ny sarin'ny ambiny amin'ireo fizarana.
Raha lazaina amin'ny teny hafa dia maro no milaza hoe Linux ary mieritreritra an'i Ubuntu ... tsy misy zavatra lavitra amin'ny fahamarinana. Ary tsara, noho ny antony hafa izay tsy misy ifandraisany, satria tsy te-hamorona lelafo aho.
elav Mampiasa ny fitsapana ny Debian ve ianao? Voamariko fa ny kinova Firefoxo dia 22.0 xD
Azo apetraka amin'ny alàlan'ny fampidinana azy mivantana avy amin'ny firefox na dia ilay kinova miorina aza izy io.
Misaotra tamin'ny fampahalalana! Vao avy nanamarina rohy iray aho ahafahanao mametraka KDE 4.10 eo ambanin'ny Testing, fa ho an'ny kinova 64-bit ihany.
Azonao atao foana ny manangona ny KDE 4.10 amin'ny wheezy, ny fanangonana tsy misy zavatra hosoratana ao an-trano, hoy i Aaron Seigo manazava tsara amin'ny horonan-tsary.
Azonao atao ny manampy ny firefox amin'ny lisitry ny loharano.list
Nanomboka teo amin'ny tontolon'ny gnu / linux aho rehefa nivoaka ny Ubuntu 8.04, inona ny fahatsiarovana, ary rehefa nilaza i elav ireo kapila nozaraina teo aloha dia manana ny 9.04 / 9.10 / sy 10.04 aho. Rehefa tsy mandeha ny mpamily toy izany ary mijery amin'ny Internet ny fomba fanamboarana azy ianao dia ampifanaraho amin'ny tianao ny gnome2, fa raha voahitsakitsakao izany indraindray dia mila mamerina mametraka ny zava-drehetra fotsiny ianao. Ubuntu amin'izao fotoana izao dia tsy tiako ny Unity sy Gnome 3 halako, tsy haiko ny antony, mampiasa xubuntu aho izao ary mety amiko io, na dia nanandrana ditros maro hafa aza aho, fa ny manana ubuntu dia ny mametraka sy mametaka efa vonona hampiasa ny zava-drehetra ianao
John morci dia hoy izy:
hahaha fa vaovao ianao amin'ny Linux ary nanomboka tamin'ny noobuntu ianao dia tsy hampiato ahy tsy hiteny izay eritreretiko momba ny ubuntu, izay tsy mandoro afo azy, izany hoe ny fahamarinana madio sy madio indrindra.
Ireo mpampiasa Ubuntu dia tsy mitombo fahalalana, ny mpampiasa Ubuntu dia ho bandy tsy te-hanatsara ny tenany foana.
Ubuntu dia mamorona fizarana ho an'ny olona antonony, mihevitra izy fa vendrana ianao ary tsy mahay mamaky teny kely, andao, tsy hifandray amin'ny vondrom-piarahamonina aho na amin'ny idealy distro, inona koa no antony mahatonga azy io fandavana, ny olona somary marani-tsaina (tsy manam-pahaizana akory) mankahala ny ubuntu sy ny fiarahamonina misy azy. Izany no antony ubuntero == mediocre
Valiny tamin'i Jhon Morci
Wow, genius super be ianao satria tsy mampiasa Ubuntu, dia afangaro amin'ny hadalana ny fahatsorana, ary izany no mahatonga anao vendrana tsotra fotsiny.
Mampiasa XUbuntu aho ary mamorona rindranasan'ny famantaran-tarehy biometrika amin'ny tranomboky Opencv sy Python, iza izao no lafo vidy kokoa? Lazao amiko izay nataonao hanaporofoana fa mahay noho ny akoho mongolianina ianao.
fahafahana dia hoy izy:
Ity no mahazatra mampiditra Chakra, Arch na Debian miaraka amin'ny havizanana arivo ary rehefa afaka izany, amin'ny alàlan'ny zava-misy tsotra hoe manana izany amin'ny PC-nao dia efa misy zavatra noforonina.
Na ny marimarina kokoa, ireo no karazana olona mitazona ny Linux tsy handroso.
Ary satria ny heck olona iray dia tsy maintsy tafita amin'ny GNU / Linux, ny iray dia tsy miaina mandrakizay ary afaka mianatra zavatra sasany amin'ny fiainana ihany. Ny marina, raha ny amiko, ny fantatro dia tsy mahalala na inona na inona aho.
Mazava ho azy fa ny olona mampiasa fizarana sarotra kokoa noho ny Ubuntu dia marani-tsaina kokoa noho ny mpampiasa Ubuntu maro, nefa tsy midika izany hoe tsy dia manam-pahaizana loatra ny mpampiasa Ubuntu rehetra, manararaotra fotsiny ny faharanitan-dry zareo amin'ny faritra hafa.
"Hadisoanao ny fahatsorana amin'ny hadalana, ary izany no mahatonga anao vendrana tsotra izao."
Hahaha, tena tsara, hangalariko anao io rehefa mila izany aho = D
Raha ireo mpampiasa Ubuntu tsy mitady hanatsara….
Nanomboka tamin'ny Ubuntu 6.10 / 7.04 aho, talohan'ny taona efa nametrahako ny lisitra Distrowatch iray manontolo, avy eo nampiasa an'i Debian aho nandritra ny 6 volana, nitady zavatra maoderina kokoa sy mifantoka amin'ny KDE, nanandrana ny Kubuntu aho hatramin'ny 9.10 (tamin'izany fotoana izany dia tena Debian) ary nony farany dia tofoka amin'ny bibikely Kubuntu sy ny fomba fiasan'i Debian ny GNU + Linux dia sendra an'i Gentoo sy Arch aho.
Gentoo dia hevitra mamitaka, fa ny fandaniako ny fiainako mandamina tanteraka ny zava-drehetra ... tsy misaotra.
Arch no fitiavana tamin'ny fahitana voalohany.
Tamin'ny fotoana nanombohako niasa ho sysadmin, sns.
Ny hafa, etsy ankilany, dia mianjera amin'ny fitiavana miaraka amin'i UBUNTU / DEBIAN nanomboka ny fiandohana ary ankehitriny dia fantany ny mitovy aminy na bebe kokoa noho izaho, izay mampiasa UBUNTU hatrany.
Ary ny hafa izay * tsy liana hianatra ny fomba fiasan'ny Ubuntu fa ny fampiasana azy tsotra izao * dia tena faly amin'ny distro sy IZAY Lavorary.
Mialà amin'ny soavaly izay tsy nihinananao olona.
Marina ny anao compa!
Arch ny tsara indrindra: D!
Efa ela aho no distro hopper fa Pacman dia zavatra hafa izay manao mihoatra ny enchant 😀
@socar dia faly aho fa mampiasa hevitra momba ny fahatsorana vs hadalana ary mody velona rehefa tsy miresaka tsotra na vendrana aho, amin'ny manaraka ndao hifanaraka kokoa, heveriko fa nahita an'io fehezanteny io ianao ary toa mamiratra tokoa rehefa nampiasa izy ireo io ary sahala amin'ny @msx no nieritreretanao ny "wow tsy maintsy hampiasa an'io aho", eny ... indraindray tsy azonao atao ny mampiasa andian-teny rehefa tsy izany ny zava-misy, na dia "mamiratra" toa inona aza izy ireo dia very ny fahasoavany.
Ho fanampin'izay, hatramin'ny nanontanianao hoe: "inona no nataonao?" ... voasoratra fa manana izany ianao ... ry namako, azafady, aza mampijaly ny fitenin-drazanay izay tsy nisy nahavita na inona na inona taminao. Saingy, tsy misy dikany, tsy nanao na inona na inona aho, tsy misy zavatra hitanao, nanao sivana spam aho tamin'ny alàlan'ny fanakambana ireo sokajin'ny statistika (Bayes, Parzen) ... Nanoratra taratasy roa aho, manana firesahana roa momba ireo zavatra vita an-tsoratra ireo aho. , fa izany Nahafinaritra omaly, efa nieritreritra rahampitso aho, io no toe-tsaina mandresy, ataoko fa tsy azonao izany.
Python, eny, fiteny mahafinaritra, fa rehefa manoratra amin'ny C ianao hanitarana ny Python, miresaka kely kokoa izahay, tianao ve? Oh ary ireo hadalana 3 ataonao ary izay iheveranao ho reharehanao, izay zavatra tena lehibe tokoa .. raha ny nolazaiko anao taminao lahy, tsy lehilahy aho, tsy hanaitra ahy kely fotsiny ianao, amin'ny famotopotorana herinandro na kely kokoa dia efa manao zavatra amin'ny opencv sy python aho.
@lawliet sy @msx dia tsy misy dikany amin'ny distro rehetra, tsy maintsy hazavako fa ohatra ny @msx dia tsy misy dikany, na mampiasa Arch aza, raha mampiasa Arch / Slackware / Gentoo ianao dia manana toe-tsaina Ubuntero, na firy na Arch inona no ampiasainao , ho adala ianao.
Ny tsy nety nataoko dia ny manoratra maimaika fa tsy manasongadina ny tsy fankasitrahako an'ity fizarana ity, raha ny hevitro (izay tsy izy irery no sady tsy tanteraka), Ubuntu dia zatra ratsy ary tsy mampianatra mpampiasa, mampino azy ireo fa adala izy ireo hatrany am-piandohana ary rehefa tojo fanamby izy ireo dia mitomany na miteny zavatra tsy misy dikany, ary mampijaly ahy mafy ny mino fa tsy manandrana mandresy vato misakana ny olombelona, ​​dia efa nanana mpiara-miasa tamiko aho izay avy tamin'ny fampiasana ubuntu sy nahazo izany toe-tsaina izany, mandra-pahatongan'ny azon'izy ireo izany "toe-tsaina" an'ny ubuntero izany, sakana amin'ny ekipa izy ireo.
Izay manana satroka hametrahana azy .. Miarahaba anao.
Ufaaaa ... Manantena aho fa hahita orinasa toa an'i Canonical ianao ((mpizahatany an-habakabaka ianao), ahem, manao SO's ho an'ny tena lehilahy manana tanjona, na zavatra izay manatsara antsika isan'andro, manantena aho fa afaka miteny amiko ianao manome loka Nover ho anao (tsia, tsy Nobel izy) ... Eny, ho an'ireo olona tsy mahalala fomba (toa ahy) izay tafavoaka isan'andro isan'andro, dia namono teo anelanelan'ny olana isan'andro teo amin'ny fiainana miaraka amin'ny fianakaviana iray izay tokony hanome fanampiana ara-moraly, a Ny Ubuntu vonona hampiasa dia mahatonga antsika ho tsara kokoa noho ny mitsambikina avy amin'ny distro mankany distro, manangona tsy amin'ahiahy ary mianatra mamolavola ny famokarako olombelona amin'ny C na Pascal na COBOL na inona ...
Ary fantatro fa tsy mandeha amin'ny laoniny ny hevitro, saingy tsy te hanampy zavatra hafa aho satria toa tsy mandeha amin'ny toerany koa ny anao, tsy nisy nilaza ny antony amin'ny fampiasana Ubuntu ... Toy izany koa, eto ihany no misy fisaorana sy fanajana kely. distro izay nahavita zavatra betsaka noho ianao noho ny fanatsarana isan'andro ananako ary tsy hanana hevitra velively hoe iza ianao, zavatra toa an'i Dennis Ritchie? Tsy mino izany aho ...
Mamaly an'i Otromás
Tamin'ny fanamarihana voalohany nataonao dia nanoro hevitra azy ianao, amin'ny faharoa dia manamarina izany ianao. Vendrana ianao!!!.
kdpv182 dia hoy izy:
Mamaly anao toy izao aho: tsy tokony hanakatona ny tenanao ianao, ny fahitana fa ny compitite-nao no maniry ka noho izany dia tianao ny manadihady sy mianatra bebe kokoa momba ny gnu-linux ary tsy mampiasa distro izay heverinao ho tsotra ianao satria manakana ny tanjona, tsia Manome anao ny zo hihoatra sy hikarakara ireo olona mampiasa distros mora toa an'i Ubuntu ho tsy mahay izy io.
Jereo ity, goavana izao tontolo izao ary manodidina ny 7000 miliara ny olona, ​​samy manana ny fahalianany samy hafa, ny sasany dia mpahay siansa amin'ny solosaina, fa ny hafa kosa miavaka amin'ny sehatry ny fahalalana hafa toy ny Lalàna, Fitsaboana ary Siansa amin'ny ankapobeny, koa mianatra mianatra mihoatra ny rindrambaiko ampiasain'izy ireo amin'ny fanatanterahana ny asany, dia be loatra izy io, izany no antony ampiasany ny Ubuntu, satria noho ny antony x dia tsy tian'izy ireo ny Windows ary tadiavin'izy ireo safidy hafa izay tsy maneho sakana hanohizana ny asany.
Toy ny hoe nankany amin'ny dokotera ianao mba hahita olana ara-pahasalamana manjo anao, ary mamaly izy amin'ny filazany aminao fa tsy mahay mandinika ianao satria tsy mahay mamantatra tena sy manoratra amin'ny tenanao, mamaky boky ara-pitsaboana sy manao fikarohana, sns. Mangataha zavatra: ny tsy dokotera anao, manome ny dokotera ny zony hiantso anao lozabe? Eny, tsy mino aho fa, ny olona tsirairay dia mandray anjara amin'ny fanatsarana izao tontolo izao arakaraka ny faritra misy azy ireo. mahaliana, tadidio fa ny fahalalana rehetra dia manatanteraka asa sosialy Manomboka amin'ny mpamorona lamaody izay manadio ny akanjo anaovanao, hatrany amin'ny mpanadio arabe izay mitazona ny tranonao sy ny arabe ary ny mpisolovava na dokotera malaza indrindra, sns., dia manatanteraka an'io asa io izy ireo, na dia marina fa misy olona manana faharanitan-tsaina bebe kokoa noho ny hafa. Marina koa fa misy izy ireo amin'ny sehatry ny fahalalana rehetra ary mandray anjara amin'ny fandrosoana revolisionera indraindray. Izany no antony maha-matihanina na ho avy matihanina amin'ny sehatra samihafa antsika tsy maintsy mifameno sy mifanampy, izany no tanjona.
Farany, tsy maintsy takarina fa ny tombo-kase ankapobeny dia manjaka amin'ny tsirairay, noho izany, satria tsy mpahay siansa amin'ny solosaina rehetra, dia mitombina fa misy fizarana mora sy tsotra, izay tsy mitaky fahalalana mandroso hanomezana fahafaham-po ny filan'izy ireo, amin'ny fomba mitovy fa misy mpisolovava manome torohevitra raha sendra manana olana ara-dalàna ianao ...
Valio ny kdpv182
Lobo84 dia hoy izy:
Mino aho fa raha misy mpampiasa te hianatra bebe kokoa dia azony atao izany amin'ny Ubuntu tenany na fizarana hafa, ny te hianatra dia tsy tokony hifandraisany amin'ny fanaparitahana ampiasainao, fa ny fahalianan'ny mpampiasa amin'ny GNU / Linux.
Tsy mankasitraka ahy aho ary tsy hitako ny Ubuntu, koa raha te hampiasa Ubuntu ianao, miankina aminao izany.
Talohan'ny nifanoherako an'i Ubuntu ary mpivezivezy teny tetsy sy teroa aho saingy nandritra ny fotoana rehetra nampiasaiko ny GNU / Linux dia nandinika indray aho ary tsapako fa tsy afaka handeha hampiroborobo ny fahalalahana isika raha tsy mamela ny tenantsika hiaina am-pilaminana eo amin'ireo mpampiasa. .
Valiny amin'i Lobo84
Buccaneer dia hoy izy:
Tena tsara hoy Lobo84. Tohanako ny hevitrao.
Mamaly an'i Bucanerojuan
Ubuntu dia fizarana ho an'ny rehetra, ho an'ireo tsy mahalala, ho an'ireo izay te hianatra, ary ho an'ireo izay mahalala sy tsy te handany fotoana amin'ny #% & /! @ Ces ary te-hifantoka amin'ny asany isan'andro. Eny, misy kinova ho an'ny mpizara Ubuntu, jereo ireo zavatra.
Ubuntu tsy natao ho an'ny geeks te-hisehoseho, fa hendry.
Ubuntu dia natao ho an'ny rehetra, tena safidy hafa amin'ny OS hafa izy io, azo antoka, azo itokisana, miaraka amin'ny tanjona mazava sy mifantoka tsara.
Tena miavaka ianao ary tena samihafa sy miavaka tsara tadiavinao, mamporisika anao aho hanandrana ny distro Justin Bieber. Tsy mbola nanandrana azy aho, fa ianao izay geek fatratra dia hametraka azy tsara ary ny tehina izany.
Tena tiako ny hevitrao ary mifanaraka amin'izany aho.
Fa maninona ianao no mieritreritra fa tsy maintsy tonga mpijirika ny tsirairay?
Misy olona maniry tsotra ny hiasan'ny solosaina ... tsy ho azy ireo ny linux?
Manana fomba fijery manokana ianao.
Toa tsy manaja olona aho ... efa nanana ny windows sy linux maro aho ... Hatramin'ny Mint .. Ubuntu sy Debian ... sns ary milaza fa amin'ny fampiasana Ubuntu na X zavatra dia mahatonga anao hiteny nefa tsy mahalala sy manadino ny fanajana ... Azonao atao ny milaza na manome ny hevitrao tsy misy tsy fahitana ... lasa milamina kokoa sy mora ampiasaina ny ubuntu ... ary ampitahao ny zavatra marin-toerana amin'ny varavarankely raha adala izany, raha ny marina dia azo idirana. .. Avy eo, amin'ny alàlan'ny fitsipiky ny tsy fanajana 3 no ilazanao ireo lesoka toa izany ... holazaiko aminao handro ao anaty rano ary handrehitra kitay roa nefa tsy hifehezana lavitra ... Satria mazava ho azy fa tsy hanampy anao hanatsara izany. ny tenanao amin'ny maha olona anao, sa tsy izany? Izay no mahatonga anao tsy manan-kialofana, mampionona ary mitady vaovao ao anaty segondra ao amin'ny google fa tsy mandray rakibolana ... Ka tsy miovaova kely ary tsy dia misy dikany .... Ny hoe misy olona manam-potoana sy te hianatra dia tena tsara ... Fa tsy ny olona rehetra dia manana fotoana, na fahaizana na zavatra hafa ary tsy noho izany antony izany no hadalana ... Ka aza mandrefy teny sy miteny mora, tsy misy fahalalana na fifamaliana, eny toa hadalana amiko izany ...
Atsipazo io, mazava ho azy fa noob ny tenany. Raha tsaraina amin'ny teniny dia ho ela vao ho tsapany ny hadalana lazainy fa mbola lavitra ny lalan-kalehany. 😉
Mandehana tsy mahalala fomba…! Inona no mitranga? Tsy afaka mampiasa Ubuntu, na distro, mpampiasa tsy misy fahalalana ara-teknika amin'ny rindrambaiko?
Moa ve tsy manan-jo hampiasa ny Ubuntu amin'ny asa ny dokotera na ny mpisolovava na ny mpanao mari-trano raha tiany? Ireo bandy tsy te-hihoatra ny tenany ve ireo, tsy misy dikany, ry zalahy tsy mahay mamaky teny kely?
Rehefa filozofia momba ny hadalana ianao dia mijery fitaratra ... majete!
PS Manantena aho fa rehefa mila manatona dokotera ianao dia tsy mahazo ubuntero izay manaiky anao amin'ny hadalana lazainao ... na farafaharatsiny fa tsy urologista izy.
Niresaka an'i Jhon Morci aho, heveriko fa tsy mazava izany tamin'ny hevitra nataoko teo aloha.
Mazava ho azy fa mankasitraka an'i Ubuntu aho, nanomboka tamin'ity tontolo ity aho ary nianatra zavatra betsaka rehefa tao aho, tsy mankahala an'i Ubuntu mihitsy, fa mitsikera ny Mazava ho azy fa tsy noraisiko ny fiarahamoniny, izay ihany, na dia noho ny fitsikerana azy dia manana lolom-po na faniriana voafehy aho hiverina ao amin'ny ubuntu izay tsy mitombina, na izany aza hoy i elav, ny tsara na ny ratsy ateraky ny ubuntu dia misy fiantraikany amin'ny sarin'ny fizarana hafa satria maro ny olona rehefa miteny izy ireo fa ny linux dia mifandraika amin'ny Ubuntu ary izany zavatra manelingelina amin'ny lafiny iray.
Ireto fanehoan-kevitry ny fanboy ireto no mandreraka. Nanomboka nampiasa distro aho izay tsy tadidiko akory ilay nantsoina hoe tonga tamin'ny floppy disk, ENY, tao anaty floppy disk (15 taona mahery lasa izay). Avy eo nampiasa redhat, mandrake aho (eny, fony mandrake 7 izy io) dia nametraka debian, suse, centos, fedora, gentoo, sns. Manana mpizara Debian mihazakazaka amin'ny asako amin'ny maody console (ho an'ny database, web, svn, openfire, firewall misy iptables sy fitsipika manual, cache misy squid, virtualization amin'ny XEN sy KVM, sns). Ka haiko ny mampiasa sy mametraka Debian avy eo am-boalohany amin'ny console; Saingy tsy izany no ilaiko Mila rafitra marin-toerana aho hampiasaina any am-piasana sy ao amin'ny kahie an-tranoko ho an'ny firosoana amin'ny fampiharana sy pejy web; ary Xubuntu dia mahafeno ny fepetra takiana amiko. Tsy manam-potoana (na faniriana) aho hahitako hoe maninona no tsy ao amin'ny repo Debian ny divay, satria mandra-pahatapitry ny hatsiaka, na tsy fandehanana, na inona izany. Tsara daholo amin'ireo izay tia an'i Debian, saingy mila zavatra mandeha aho satria mila manokana ny 0% amin'ny fotoanako amin'ny fampandrosoana.
Efa nandalo ny dingana nataoko tamin'ny famotopotorana aho, ary raha mila manao izany aho dia hametraka mpizara vaovao miaraka amin'ny serivisy X; Tsy tiako ny mandany fotoana amin'ny fametrahana ny birao, na amin'ny fampiasana ny kinova Debian Stable.
Ary amiko dia tsy hoe tsy misy dikany izany. Raha manam-potoana handaniana tontolo andro hianarana sy fikarohana momba ny distro anao aho dia arahaba anao, fa mampiasa ny fotoanako aho hianarana sy hanavaozana amin'ny lafiny fampandrosoana sy teknolojia vaovao ho an'ny fampiharana.
Io no hevitro. Tena mahasosotra tokoa fa antsoina hoe mediocre fotsiny amin'ny fampiasana X distro. Ary tena mahazo aina sy faly amin'ny Xubuntu aho mandritra ny 1 taona mahery.
Miala tsiny fa valin-teny tamin'ny fanehoan-kevitr'i Jhon Morci ity fanehoan-kevitra ity.
Hahaha ny sysadmin ao anatin'ny hazakazaka amin'ny solosaina no iray amin'ireo rohy ambany indrindra, tsy azoko hoe maninona no heverin'izy ireo ho tena manam-pahaizana izy ireo.
Tsy fantatro izany .. Tsy ekeko izany, misaotra an'i Sysadmin fa ny sisa amin'ireo mpahay siansa amin'ny solosaina dia afaka manao izay ataony .. 😉
Lehiben'ny fampandrosoana aho amin'ny orinasa iasako ho an'ny fahalalanao; ary nanao ny fametrahana sy ny fametrahana ny lozisialy aho fony intern.
Koa satria izahay dia olona marani-tsaina indrindra ianao ary manana asa lehibe; lazao anay hoe aiza ianao no miasa. Heveriko fa farafaharatsiny mba ho Mpitantana Systems amin'ny orinasa marobe toa an'i Wallmart ianao; Exxom, na iray amin'ireo.
+100, fantatro ianao, @ Morcilla.
Ny distro voalohany nifanena tamiko dia i Red Hat sy Suse, saingy izay azoko natao hanaovana ilay dingana farany dia ny Ubuntu. Tsy dia nampiasaiko hatry ny ela (ny farany nampiditra azy dia 10.10, ho an'ny tsiriko, ny tsara indrindra). Fa tsy manenjika na mitsikera ireo izay mampiasa azy aho ankehitriny. Tsy tiako ny làlana nalehany, saingy heveriko fa ny tombony lehibe indrindra amin'ny Linux dia ny safidy!
Ka raha ny amiko dia nanomboka tamin'ny Ubuntu 8.04 aho, nisy kely io! Ankehitriny dia miaraka amin'ny OpenSuse 12.3 aho, (tena tiako izany), rehefa avy nampiasa Kubuntu. Ankehitriny, maro amintsika no nanomboka an'ity làlana ity tamin'ny Ubuntu, ny fanajana ahy.
Hadinoko ny nilaza fa tamin'ny 8.04 fotsiny aho no nanomboka tao amin'ny Ubuntu.
Tsy mpankafy Ubuntu mihitsy aho, nampiasa Knoppix foana aho fony mpifindrafindra monina sy Debian rehefa nilamina, Ubuntu Tsy maintsy nampiasa izany noho ny antony miasa (ny politika politika no teny) fa tsy hitako mihitsy ny fon'ny distro. , Debian kosa manana be.
Manana Ubuntu ao an-trano aho ary any am-piasana dia mametraka Ubuntu, noho ny antony tsotra dia afaka mametraka sy manamboatra ireo fitaovana miasa haingana aho ary ao an-trano satria te hanandrana an'i Debian ary tsy afaka mametraka azy, nanandrana in'arivony aho ary misy tsy misy fomba hamelana azy hanomboka amin'ny naoty (asus)
misy distro hafa atoronao ahy hiara-miasa amiko ve? mila client oracle, sqlplus, ary ica aho handray
Eny, misy distro arivo, fa raha mahazo aina amin'ny Ubuntu ianao, maninona no miova?
Na dia nanomboka tamin'ny Mint aho fa tsy Ubuntu, dia hajako izany, satria io no distro nampanakaiky ny olona amin'ny Linux.
Josevictorbj dia hoy izy:
Tsy mitsikera ny Ubuntu mifanohitra amin'izay aho noho ny Ubuntu fa betsaka ny olona miresaka momba ny Linux. Tsy tiako ireo kinova farany ka mitady izay hosoloana aho fa betsaka ny tokony hisaorako an'ity fizarana ity. Mampiasa azy io aho hatramin'ny andiany 7.04, talohan'ny nampiasako ny Red Hat 7, Mandrake, Suse ary mieritreritra amin'ny Debian aho. Ho soso-kevitra, aza avela hitsikera ny Ubuntu dia Linux ary raha tsy tianao izany dia ovao izy, tsy maintsy misy iray izay tianao, ny zavatra tsara amin'ny fampiasana rafitra zero $ Linux.
Valiny tamin'i Josevictorbj
Tena marina, nanomboka tamin'ny Kubuntu 5.04 aho ary iray volana taty aoriana dia nankany amin'ny Ubuntu tsara indrindra aho (araka ny tenako) tamin'ny fotoana rehetra: Ubuntu 6.06 Dapper Drake, tao no nianarako zavatra betsaka momba an'ity tontolo Linux ity.
Miombon-kevitra amin'ny teny rehetra ao amin'ny lahatsoratrao aho. Manjary fantatra i Linux ary hajaina noho ny Ubuntu; Miaraka amin'ny fomba tsotra sy pedagogical ary mahomby hanatrarana olona, ​​dia mitombo ny Linux, na izany aza, rehefa mahita ny hatsaram-panahy amin'ireo fizarana hafa izay tsy ao amin'ny Ubuntu ny mpampiasa, dia olana iray izay efa nodinihina loatra tao amin'ny DesdeLinux.
gnambu dia hoy izy:
Miala tsiny aho raha milaza fa hitsikera foana an'i Ubuntu aho amin'ny fanararaotany ny anarany manokana. Tamin'ny voalohany i Ubuntu dia ubuntu. Tapitra izany. Ho an'ny tsy fitoviana dia tokony hanova ny anarany sy ny sary famantarana izany.
Mamaly an'i gnambu
Raha ny fanazavana, na dia hita taratra amin'ity pejy ity aza izany dia tsy mampiasa Ubuntu aho fa Mint.
@cat, mahatsikaiky fa manana totozy roa avy any XFCE ianao, somary mampihomehy ahy izany
hahaha Nahafinaritra ahy ihany koa ny fifandraisan'ny nick niaraka tamin'ilay tiako XFCE.
tena mampiasa ny 10 xD ve ianao?
Eny, mampiasa ubuntu ihany ianao, satria ny mint dia
Mint dia Ubuntu araka ny tokony ho izy. Ho ahy ny Mint amin'izao fotoana izao dia ubuntu kokoa noho ny Ubuntu tenany.
Ubuntu no fanaparitahana amin'ireo mpampiasa indrindra eran'izao tontolo izao, ary misy olona an-tapitrisany (tsy an'hetsiny) mampiasa azy io ary mihamaro hatrany. Raha tsy an'ny Ubuntu, Linux dia mbola saika tsy hampiasa server ary hampiasain'ny saka efatra.
Misaotra an'i Ubuntu tamin'ny nanamorana ny Linux sy nanam-pahaizana kokoa!
Ary noho ny fanaovana Xubuntu izay miasa tsara ho an'ny olona mikorontana toa ahy izay sady tsy mahalala no tsy te hahalala momba ny tsipika kaody sarotra sy ny mikapoka ny kirihitrala dia ampy ahy ny manandrana mianatra code html, mahafehy sary ary mametraka filaminana amin'ny tenako manokana. fiainana juass! XD
Miarahaba anao ary misaotra anao koa! 🙂
Ny Linux dia azo ampiasaina hatramin'ny talohan'ny Ubuntu, misy Mandrake sy Fedora, ary koa OpenSUSE ary azo ampiasaina tsara izy ireo 😉
Azo antoka, fa ny fampiasana windows dia mora kokoa, noho ny mpamily
Valiny tonga lafatra.
FA TSIA! Tsia.
Raha tena resy lahatra ianao dia apetraho amin'ny endriny taloha ireo distros ireo ary mankafiza 🙂
Volam-bolo dia hoy izy:
Araka ny nolazain'izy ireo taminao, Linux dia azo ampiasaina hatramin'ny talohan'ny Ubuntu ary izany no fitarainan'ny maro ary efa nilaza izy ireo hoe, Ubunto! = Linux.
Soa ihany fa nanomboka tamin'i Mandrake aho-> Slackware-> Arch ary eny, efa nanandrana an'i Ubuntu aho ary ny marina dia tsy maharesy lahatra ahy mihintsy.
Valiny tamin'i Max Steel
ny mahatonga an'i Ubuntu "mora" dia ireo lahatsoratra zillion natokana ho azy.
"Misaotra Ubuntu fa nanamora ny Linux sy nanam-pahaizana kokoa!"
Raha manao azy be dia be angamba, fa ... izany? Nerd.
Miala tsiny amin'ny hevitra, ny zavatra nolazaiko dia tamim-pinoana marina! Mety hampiasaina ny Linux, nefa azo antoka fa tsy dia malaza, na mora toy ny ankehitriny (lojika koa io).
Ny zavatra tsara momba ny Linux dia hoe mihabetsaka ny fampahalalana (misaotra internet !!!), ny zavatra ratsy dia mila firaisana. Mizarazara be ny hevitra, na dia manana fanantenana aza aho, ary mieritreritra aho fa efa misy vokatra tena tsara.
Raha ny fijeriko ny fanetren-tena! Izay tsy fantatro!
Raha mila fandraisana anjara feno fanetren-tena ianao dia ny rafitra tsara indrindra ho ahy dia:
1st STABLE marina.
2º SIMPLE, intuitive, mora ampiasaina.
MODULAR faha-3, azo ovaina amin'ny tsiro sy fotoana mety hitombo.
Ny zavatra akaiky indrindra ho an'ny newbie mikorontana toa ahy (amin'ny Linux) dia Xubuntu.
Mpampiasa ubuntu aho nanomboka tamin'ny 9.04, ary tiako izay ataon'ny ubuntu sy canonical; Manome safidy hafa tonga lafatra sy maimaim-poana ho an'ny rehetra izy ireo, ny firaisankina amin'ireo kinova roa voalohany izay tsy dia tiako loatra, fa ankehitriny tsy afaka mametraka hafa; Tiako ny firaisankina; ny antony lehibe indrindra dia ny famokarana, ny hatsarana ary ny dikany roa, mamorona OS ho an'ny takelaka, finday ... fa tsy tahaka ny win2 8 izay manao kopia sy mametaka ny metatra ao aminy.
Noho ny fandrosoany haingana, isam-bolana dia mahita solosaina bebe kokoa miaraka amin'ny lalao Ubuntu efa napetraka sy lalao vaovao ho an'ny Linux aho.
Homeko ny fanohanako ny ubuntu sy ny canonical, heveriko fa manana tanjona tsara izy ireo, na dia tsy misy olona tonga lafatra eny an-dalana aza.
Ubuntu irery no distro manana hery hihoarana ny windows.
Eh heveriko fa betsaka kokoa ny fitaovana finday mampiasa android noho ny an'ny pc misy ubuntu. arahabaina
Hitako ny Ubuntu sy debian, ny distro matotra kokoa.
Ha, mampiseho izany fa tsy fantatrao ny fizarana hafa.
Ahhh Ubuntu, tamin'ny farany dia tavela niaraka tamin'i Arch sy Ubuntu amin'ny HD aho. Tiako fotsiny ny Unity.
Apetraho eo amin'ny andohalambo ny firaisana
Tsy te-hamoaka ilay balaonina aho fa nanomboka tamin'ilay izy
Miarahaba anao: ¬ (
Tsy sarotra SOOOOOAAAAAAAAAH i Debian 😉
Tsy miharihary, ny mifanohitra amin'izay, ny "power distros" dia iray amin'ireo sakaiza indrindra - tsy tena izy, fa mamitaka toa izany!
Izy io dia toy ny Corel DRAW, rehefa manomboka mampiasa azy ianao dia ho hitanao fa tena mora izany saingy arakaraky ny ampiasana azy io no hahitanao azy bebe kokoa.
Fa kosa ny Photoshop dia toy ny Arch: toa sarotra io amin'ny voalohany fa arakaraky ny ampiasana anao azy, dia toa tsotra kokoa aminao ny zavatra rehetra 😀
Rehefa manome fiononana aho dia natao ho an'ny marary vavony tsy hampiasa an'i Debian 😀
Fanamarihana: "CorelDRAW vs Adboe Illustrator" no tena izy fa ny hevitra no takatra 😀
Ary inona ny distro GIMP ao amin'ilay fanoharana? XD
Nanandrana nametraka an'i Debian aho ora vitsy lasa izay tamin'ny milina virtoaly mba hizaha toetra izany ary rehefa vita ny fametrahana azy dia naveriko ilay milina fiainana tena faly ary hitako fa ny terminal ihany no nametraka ahy ... angamba mbola tsy afaka mandao ny xD miorina amin'ny Ubuntu
Eto (ao amin'ny FromLinux) misy fomba maro hametrahana Debian miaraka amina sehatra misy sary manomboka amin'ny terminal. Raha tianao ny zavatra mora kokoa (ny zavatra tsotra tsy misy fikasana hanafintohina, dia nanao izany ihany aho tamin'ny fotoana voalohany nametrahako ny debian) azonao atao (raha mifandray amin'ny Internet ianao) dia zahao boaty iray misy ny hoe "interface user graphique" ( na zavatra toa izany). Ny safidy faharoa dia mametraka gnome 2 (debian 6 na potserina) na gnome 3 (debian 7 na wheezy), na dia azonao atao aza ny mahazo iso, izay, amin'ny fomba mitovy amin'izany, mametaka ny KDE, Xfce, Lxde sns.
Ny zava-mitranga amiko dia ny fametrahana azy amin'ny virtualbox avy amin'ny solosaina findainy ary milaza amiko izy fa tsy mahita ireo kopia (angamba raha te-hametraka azy aho dia tokony hifandray amin'ny tariby fa tsy WIFI) ... toa tsy maintsy manao izany aho ampidino ny DVD
Tsy maintsy mametraka safidy ianao (tsy misy hevitra aiza, tsy mampiasa virtualbox aho satria mandeha miadana dia miadana ny pc) ahafahanao manao ilay "virtoaly" ho tahaka ny fifandraisana ethernet
Heveriko fa efa hitako io, na dia tsy azoko antoka aza (mpampifandray ny tetezana–> eth0)
Ny marina dia rehefa tonga tany Linux aho (roa taona lasa izay) dia tsy azoko ilay "fanafihana" tamin'ny Ubuntu satria Linux io ihany, ary ny marina dia mbola tsy azoko ilay izy.
Tezitra ihany koa aho rehefa tonga ny Unity satria tsy zakan'ny solosainako ilay izy ary tsy maintsy nitady distro hafa aho fa rehefa avy namaky ny tafatafa niarahana tamin'i Mark Shuttleworth ary nahita ny hafaliany ary rehefa nahita ny zavatra nataon'izy ireo tamin'ny Ubuntu tamin'ny Smartphones ary amin'ny takelaka dia faly aho ho azy ireo ary manantena aho fa hahomby izany.
Ary koa, noho ny Unity no nahitako ny Xfce izay tiako kokoa noho ny Gnome mahazatra.
Tsy manaja ny ubuntu aho, mieritreritra fotsiny aho fa sombin-javatra io ary tsy izany no zavatra niainako voalohany tao amin'ny linux, debian izy io, ary nanomboka teo dia nanohy izany aho, na dia nanandrana distros maro aza aho, miandry ny debian 7.
Manjaro KDE no ampiasaiko izao, ary mieritreritra aho fa hipetraka eto.
Na izany aza, heveriko fa fizarana lehibe i Ubuntu. Ny endrika sy fahatsapana ny Firaisankina dia zavatra tadiaviko indraindray, tsy lazaina intsony ny fahaizany mamantatra ireo fitaovana. Heveriko fa Canonical dia miasa tsara amin'ity distro ity (vao mainka aza miaraka amin'ireo kinova LTS).
Na dia ekeko aza ny zavatra sasantsasany, toy ny fampiasana Mir amin'ny ho avy fa tsy Wayland, dia tsy zaraiko, ankoatry ny antsipiriany hafa.
ubuntu dia nanompo rehefa tsy nisy i Unty, rehefa manontany ahy ianao hoe inona no atao amin'ny linux, inona no holazaiko azy ireo?, inona ny fanovozana azoko omena azy ireo? ny firaisan-kina dia hanasarotra ny fiainanao amin'ny fanovana isaky ny enim-bolana, mbola hisy ve ny xubuntu? Ny lazaiko aminao dia misy rafi-pandidiana maromaro izay mampiasa ny fotokevitra mitovy ary mila mamaky teny betsaka ianao, saingy zavatra masiaka izany avy eo, raha tsy milalao lalao video ianao 😛
Tsy manome ahy ny hevitro izy ireo dia hoy izy:
Heveriko fa maro no hanaiky ahy fa nanomboka tamin'ny Ubuntu izy ireo noho ireo CD nozarain'i Canonical. Ary izany no nanombohako tamin'ny 5.10 nomen'izy ireo ahy. Hitako fa tena nahafinaritra ny filozofia nataony, nijanona afaka, momba ny "Linux ho an'ny olombelona" sns. Saingy rehefa nahalala ny GNU / Linux aho dia nahatsapa fa tsy mahafeno ny filako betsaka amin'ny maha mpampiasa azy, ka dia natahorana hifindra tany Gentoo tamin'ny Janoary 2009. Tsy manenina aho fa nisy fanovana, ary ny fametrahana azy dia IZAY tsy dia mampivadi-po noho ny zavatra hafa.y izay mandoko ny fitsarana an-tendrony amin'ny Internet momba an'i Gentoo.
Ny zava-misy dia na dia marina aza fa maro amintsika no nahalala ny GNU / Linux tamin'ny alàlan'ny Ubuntu, dia tsy izany no izy tamin'izany fotoana izany: izany no antony itsikeraako azy, ary ataoko eo ambanin'ny heveriko ho fepetra henjana sy azo iadian-kevitra izany. (raha ny marina, tsia?). Betsaka amin'ireo politika canonika sy mr shuttleword (na izay tsipelina azy io) no nametraka ny filôzôfia 'ubuntu' hitako fa nahaliana ahy tokoa. Ny fahatsapako manana ubuntu dia izy ireo fa tsy tena liana amin'ny fananganana vondrom-piarahamonina fa liana amin'ny fidiram-bola (izay tsy ratsy, fa ny manohy manafina azy io amin'ny filozofia 'ubuntu'). Rehefa nivoaka ny tabataba amin'ny fanovana ny toeran'ny bokotra Metacity kavia, ary nilaza ilay rangahy voalaza etsy ambony hoe "Tsy demokrasia io", tsapako fa nanao ny tsara aho tamin'ny nandao azy.
Valiny ho ahy dia tsy voaloa ny hevitro
Tsy nanomboka tamin'ny Ubuntu aho, efa taona maro talohan'izay no nampiasa an'i Debian, openSuse. Saingy Ubuntero aho ary tsy ela dia hitako ny hadisoako.
Tsy fanontaniana izay tsy tiako ny làlana, izany koa. Ny zava-mitranga dia mampiasa rindrambaiko maimaimpoana i Ubuntu, saingy tsy manohana azy.
Rehefa mila zavatra izy dia mampiasa tetikasa efa misy, fa tsy manohana azy dia mampiasa ny fivoarany izy, manova anarana, manolotra azy ho azy, ary raha nahita anao aho dia tsy fantatro ianao.
Tsy midika izany fa afaka mandray tombony ankolaka isika, saingy ny fikasan'i Ubuntu dia tsy tsara ho an'ny vondron'olona rindrambaiko malalaka. Orinasa iray izy io ary mieritreritra toy ny iray.
Tsy fanajana izany, na farafaharatsiny, heveriko fa ...
Tokony hanaja azy ianao, toy ny hajaina ny sakaizanao taloha
Tsy misy isalasalana fa amin'ity bilaogy ity dia afaka mamorona fidirana ny olona rehetra
Miarahaba anao, izao no tokony hatao foana ny forum, misy zavatra tolo-kevitra fa tsy ady distro kely akory
yon.conor dia hoy izy:
Tano mafy ny afo-nao !!! Tano mafy ny afo-nao !!! HAHAHAHA uyyyyy tadidiko rehefa nametraka ny ubuntu Dapper Drake, 6.06 !!!! inona no fahatsiarovana tsara, na dia tsy nanomboka tamin'ity distro ity aza aho dia nanomboka tamin'i Knoppix tamim-pahalianana no nomen'izy ireo ahy tao anaty Flisol iray ary nandoro tao aho Knoppix fedora sy Ubuntu !!!!!! Nahalala distros aho fa satria hitako fa nisy zavatra nanintona ahy ny sary famantarana azy ireo, dia hitako izy ireo rehefa nametraka azy tao anaty compus izay nitarika ny Flisol, hoy aho hoe: «tadiaviko amin'ny Hard Drive» hahaha avy eo nanomboka nampiasa azy aho, Navelako, naveriko, navelako, niverina aho, ary noho izany, nianatra distro hafa aho fa manana fitiavana manokana an'i Ubuntu ihany koa na dia tsy distro aza ny reniko raha hiteny, inona koa, tamin'ny fitsingerenan'ny andro nahaterahako dia nahazo feisty Feisty CD izay mbola ananako ao anaty lahatahiry rakipeo, tadidiko fa mamo tamim-pifaliana hahaha nahomby 100! Tsy nangataka na tamin'iza na tamin'iza aho aaaaaaaa tamin'ireny fotoana taloha ireny ... toa lasa madio kokoa aho ary aleoko filozofia KISS sy distro toy ny chakra na dia mampiasa LMDE 201303 aza aho izao, heveriko fa ampidinin'izy ireo amin'ny rano ovy ny rano, ary ny sasany amin'ireo izay tsy tian'ny sasany, fa nijery an'io lalana io aho fa ny x11 bla bla dia mampijaly ahy manokana Shuttlewore na izay voasoratra rehetra dia tsapako fa misy distro tsara mandray an-tanana fa hey. alea jacta dia
exe dia hoy izy:
Eny, eny, tsy ny zavatra ratsy rehetra .. Nomeny fifaliana maro isika tamin'io fotoana io.
Mamaly toe Xe
Heveriko fa maro no tsy tia ny Ubuntu amin'ny sehatr'asa misy azy, fa sahy manao fametrahana Ubuntu mafy tahaka an'i Debian.
Angamba Debian na Ubuntu, miasa haingana be izy io, milamina ary maivana fa toa nanao fahadisoana aho ary nametraka an'i Debian.
Toa mampihomehy ahy izany fa isaky ny tontolo Ubuntu dia fizarana izany, ka dia nihoatra izany ary nametraka XFCE tanana, manana Ubuntu amin'ny XFCE aho fa tsy Xubuntu.
Ho an'ny anjarako dia nanomboka tamin'ny Linux Mint 9 (isadora) aho, nahatsapa ho toy ny HACKER vao manoratra fanavaozana sudo apt-get ao amin'ny console, avy eo nampiasa an'i Fedora, mpampiasa Fedorian aho nandritra ny fotoana fohy, nifindra tany amin'ny Kubuntu ho an'ny antony tsotra nanome olana maro rehefa nametraka (ny Fedora 18), manana fizarana 15 mahery aho, ary tamin'ny fizotran'ny fametrahana dia toa sarotra be ny nifidy ny fizarazarana marina, ka nifindra tany Kubuntu aho, mora kokoa ary tsy natahotra ny hamafa zavatra. Manana boot roa miaraka amin'ny windows 7 ho an'ny lalao aho, na dia efa misy napetraka ao amin'ny Kubuntu miaraka amin'i Steam aza aho.
Tsy nanomboka tamin'i Debian aho ary efa nisedra distros (arch, suse) maro, rehefa nivoaka tamina firaisankina i Ubuntu dia notsikerainiko izany, avy eo liana te hahafantatra aho fa nanandrana azy ary nifanintona. Indray andro koa dia nofoanana ny fandefasana azy mba hiasa tsara ny pc ary indraindray maharary ny aretin'andoha, tsy te ho manam-pahaizana aho ka tiako ny hanana ny zava-drehetra hahafahana manao programa tsara ary ao anatin'io ubuntu io dia tsara, koa ny firaisan-kina dia mitahiry be amin'ny fikarohana miampy ny solomaso. Na izany na tsy izany dia tiako izany, na dia mizaha toetra ny fototra XD aza aho izao
Heveriko fa tsy ilaina ity lahatsoratra ity! … Tsoriko fa tsy hitako ny antony andefasana hoe sekta ao aminy izy ireo !! manaova lahatsoratra iray izay anaovan'ny mpampiasa hevitra iray satria ny fangatahana dia mamorona lahatsoratra tsy misy fotony fotsiny ao anaty bilaogy heverina fa matotra .. tsy misy afa-tsy ny layer 8
Misaotra naneho hevitra ¬¬
Ok, izany fanehoan-kevitra izany dia avy amin'ny olona manana ny "freebsd freebsd (freebsddick)" ho an'ny olona iray mampiasa Debian miaraka amin'ny KDE.
Aiza ny sectarianisma!? EPIC FAIL.
freebsdick dia hoy izy:
Heveriko fa afaka mahita mihoatra ny sabatry ny fambara ianao ary mahalala mialoha izay rafitra sy tontolo iainana ampiasaiko .. !!
Mamaly an'i freebsdick
Nahazo alàlana, handeha aho izao ary tsy hanao tantara fohy (toy ny fampisehoana forum), azoko lazaina fa maro ireo CD avy amin'ny distros samihafa no nandalo teny an-tanako, nanomboka tamin'ny 1998 fa rehefa nanomboka nankafy linux honeys aho. dia niaraka tamin'ny iray antsoina hoe winlinux2000 Napetraka toy ny lalao video DOS io.
Tamin'ny taona 2006 dia nisy mpiara-miasa iray nanome ahy »ny liveCD voalohany ahy» an'ny ubuntu 5.04 (wow!) Ary hatramin'ny taona 2009 vao tena nametraka, nanamboatra ary nametaka ahy (araka ny nomen'ny tranonkala ahy hahatakatra) Linux Mint Helena 8 LXDE izay nananako fitiavantena handray ny anaran'i Neny.
Androany dia tsy afaka mifindra avy amin'ny Linux Mint aho (tsy haiko ny antony) fa avy any LXDE, mandalo gnome 2, izao aho dia eo amin'ny KDE (heveriko fa fisaorana an'i Elav) ary angamba indray andro any maka MATE aho.
Misaotra ubuntu! (Tsy ianao io fa Izaho).
Tsy ianao fa izaho XD
Ubuntu dia distro tsara dia manana ny zavatra tsara vitany teo amin'ny fiarahamonina Linux tamin'ny tena antenaiko fa handeha tsara izy, nanomboka toy izao aho RH, OpenSuse, Ubuntu (Nanaisotra aretin'andoha maro aho), Debian (Azoko ny antony Ubuntu dia mifototra amin'izany) ary ankehitriny Arch (Te-hamoaka famotsoran-keloka aho) ny distro tsirairay dia samy nanana ny fananany ary namela anao zavatra tsara hatao tsara na amin'ny fomba hafa, vao maika manantena aho fa ny rafitra findainao dia mety ho fanekena lehibe ny ezaka efa nataon'izy ireo, miditra amin'ny distro izay nahazo aina kokoa aho dia i Debian sy Arch, zavatra mifanohitra amin'ny filozofia izy ireo fa izy ireo no nahatsapako fa tsara tamin'ny hafa aho nahatsapa fa nisy zavatra tsy ampy.
Nandritra ny fotoana lava be, tsy nanoratako tsipika ato amin'ity bilaogy ity, na dia teo aza ny zava-misy fa tsy nitsahatra mihitsy ny ho ampahany amin'ny famakiako an-tery ny fampahalalana sy ny hevitra narotsaka eto. Ny iray amin'ireo antony lehibe nanapahako hevitra tsy haneho ny hevitro amin'ity tranonkala ity dia ny tsy fandeferana. Tsy ny tsy fandeferan'ireo mitantana ity toerana ity, satria tsy nanitsy lahatsoratra mihitsy izy ireo hanalana na hanaisotra ny hevitro, fa ny tsy fandeferana izay ataonay izay mandrafitra ity vondrom-piarahamonina ity indraindray.
Ary mariho tsara fa izaho dia nanoratra hoe "mihetsika izahay", milaza ny maha-olona voalohany. Isika rehetra…
Manontany ny mpanoratra ny lahateny aho, inona no azonao amin'ny fanajana an'i Ubuntu? Ny foto-kevitry ny "fanajana an'i Ubuntu" ve dia tokony hangina ny rehetra fa tsy hilaza izay tsy tiantsika momba izany OS izany? Zo inona, masina na ety an-tany no manampy antsika hangataka zavatra toy izany? Moa ve tsy ny sainam-piarahamonin'ny vondrom-piarahamonina GNU ary, ankoatr'izany, fahalalahana maneho hevitra?
Toa mahatsiravina amiko ny fangatahana fanajana ho an'ny rafitra fiasa (na distro, izay tianao hiantsoana azy) ... saingy tsy misy fanajana ireo izay milaza ny tsy fitovian-kevitra amin'ny Ubuntu. Ohatra? Manana iray mora ampiasaina aho:
JolaySAO hoy izy:
5 aprily 2013 amin'ny 6:35 hariva
Ireo prank rehetra ireo dia milay ihany mandra-pahatsapanao fa miadana kokoa noho ny ady maoderina ny birao Ubuntu! (Farafaharatsiny amin'ny 12.10 izay farany nampiasako ary voatery nesoriko)
Ny angatahiko amin'ny Ubuntu dia ny fahazavana bebe kokoa azafady. Ireo desktops izay mihinana ny loharanon'ny rafitra rehetra dia lany andro, eo no ahitanao azy, avy eo ny 7 tsy dia misy dikany sy maivana ary 8 maivana noho ny 7. Nihamaivana ihany koa i Kde, xfce dia manana mpampiasa bebe kokoa. Maka latabatra mahafinaritra izy ireo nefa maivana, indrindra raha tena maniry ny hanao ilay fitsambikinana amin'ny takelaka izy ireo dia mila maivana toy ny mihinana. "
Tsy haiko hoe inona no tsy nety hoy i JulioSAO izay mendrika an'ity valiny ity:
«Ceasefire miaraka amin'i Ubuntu miteny hoe:
5 aprily 2013 amin'ny 11:05 hariva
@julioSAO: "miadana kokoa noho ny ady maoderina ny birao ubuntu"
julioSAO tianao aho dia efa manana lahatsoratra sy taona vitsivitsy mamaky momba ny Linux sy mampiasa distros. noho izany, fahalalana kely indrindra no raisina momba ny fahombiazan'ny OS arakaraka izay fitaovana ampiasaina. Gaga aho fa mandany fitsarana kely lanja ianao, vao mainka aza amin'ny fahalalana fa tsy misy antony marim-pototra ny fanambaranao.
Mety tsy mandeha tsara amin'ny solosainao ny Ubuntu, mety voan'ny Ubuntu ianao, ny lolom-poo dia mety hitarika anao amin'ny fehin-kevitra mitanila fatratra ary tsy misy zava-misy, ny sainao dia mety ho feno zavatra ka manjary manjavozavo ny antonyo ... fa na eo aza ny maro mety ... tsy manan-jo hiteny amin'ny fitsarana ianao amin'ny distro izay manana mpampiasa an-tapitrisany amin'ny karazana sy fepetra rehetra.
Avelako ny rohy mankany amin'ny lahatsoratra bilaogy iray izay tsy malala-tanana amin'ny Ubuntu ankehitriny, fa amin'ny maha olombelona mahazatra azy ireo dia nijanona kely izy ireo handinika.
Manantena aho fa tianao ny antiubuntu maro hafa, araho io ohatra io. "
Fa maninona no atao hoe mpandainga ny olona milaza fa tsy maivana toy ny disto hafa ny Ubuntu? Maninona no miantso lolom-po amin'ny olona iray izay mangataka fotsiny ho maivana ny Ubuntu? Raha mpampiasa iray, iza ny mpanjifa ary ho an'iza no anaovana ny distro, tsy mahazo manome hevitra ... dia iza izany? Ilaina ve ny fananana azy, angamba, amin'ny panteon iray izay forongon'ireo "mpivavaka" lehibe fotsiny hahafahana manome hevitra ara-dalàna?
Azafady noho ny nilazako azy hoe Zironid, fa tsy mangataka fanajana an'i Ubuntu ianao dia tokony hangataka ny hisian'ny, voalohany indrindra, ny fanajana ny mpampiasa ny distro samihafa mandrafitra ity tontolo GNU / Linux ity. Toa ahy fa tena zava-dehibe ny fahafantarantsika ny fomba hanakiananay ny tsikera ataontsika, nefa koa handevona ny fitsikerana ny hafa. Raha mangataka fanajana ny Ubuntu isika, dia aleo tsy miovaova ary manaja ny mpampiasa tsy ny distros hafa ihany fa ny rafitra miasa hafa, toa ny Windows sy MacOSX, izay matetika no esoesoinay miaraka amin'ny adjectives mahafeno fepetra mendrika.
Rehefa tratra io fanajana manerantany eo amin'ireo mpampiasa io, ny GNU / Linux dia ho lasa hadilan'ny fahalalahana marina, tsy ny lozisialy ihany fa an'ny olombelona ary avy eo, amin'izay vao hianarantsika ho tsara kokoa amin'ny Linux.
Tsy misy aloha izany ... fa miombon-kevitra amin'i tina aho.
Nataoko ity lahatsoratra ity, indrindra, tsy mba hikatona ho antsika izay tsy tia ubuntu, fa mba hanaja kokoa isika rehefa manome ny hevitsika.
Nanakiana mafy an'i Ubuntu aho, saingy rehefa nisaintsaina aho dia nahatsapa fa ny sasany amintsika dia tsy mahazo tanana amin'ireo tsikera ireo, izay mety hanafintohina ny mpampiasa sasany.
Ilaina ny fanakianana ho an'ny fanovana, saingy miankina amin'ny fomba fanaovana ny tsikera, ny fanovana dia tsara kokoa na ratsy kokoa.
Mikasika ny zavatra JolaySAO, tsapako fa manome tsiny ahy ianao noho ny valiny voarainy. Fantatro fa mihisatra somary miadana ny Unity, saingy tsy izany no tsy ampiasako ubuntu, na izay itarainako.
Misaotra tamin'ny valiny tsara fanahy. Rehefa avy namaky ny andalana faharoa amin'ny valinteninao tsara, indrindra ity fehezan-teny ity: «... ireo tsikera ireo, izay lasa lasa manafintohina ny mpampiasa sasany.», Fehin-kevitra fa mieritreritra mitovy ihany izahay amin'ny farany ary amin'ny teny vitsivitsy dia azo fintina toy izao : misy ny fitsikerana sy ny fanehoan-kevitra, manoloana an'i Ubuntu, natao ra ratsy, izay ny tanjon'izy ireo dia ny manelingelina vondrona mpampiasa iray.
Marina izany Zironid. Averiko ihany fa ny iray amin'ireo zavatra izay, volana maro lasa izay dia nijanona tsy nandray anjara mavitrika tamin'ny bilaogy sy forum natokana ho an'ny GNU / Linux aho dia ny tsy fanajana eo amin'ireo mpampiasa GNU / Linux izay, toa ireo foko ireo, mitady izay kely indrindra. manala ny satroka. Ny sasany hiaro ny kanelina andriamaniny ary ny sasany hiaro ny firaisana amin'ny andriamaniny ... fa ny olana dia tsy hoe ny mpivavaka amin'ny andriamanitra GNOME dia "naniratsira" ny Andriamanitra masina KDE ... sns. Tsy manisa ireo "mpitory teny", izay "nanazava" ny sasany distro, dia manandrana "mamadika" ny hafa ary mandray anjara an-tsokosoko mba "hampianatra ny distro masin'izy ireo" amin'ny lohahevitra iray izay avy amin'ny Linux Mint, mba hametrahana ohatra.
Ary nanapa-kevitra ny hiala sasatra aho satria izaho koa dia efa latsaka tao anatin'io faribolana ratsy io. Naleoko nandany an'io fotoana io niaraka tamin'ny fianakaviako sy namaky boky izay manampy ahy hahay hiteny sy hanoratra amin'ny fiteny espaniola tsara, satria ny fitenin-drazako dia anglisy.
Avy amin'ny valiny voarain'i julioSAO dia tsy manome tsiny anao aho fa ohatra fotsiny no ampiasaiko. Mangataka ianao fa hajaina ny mpampiasa Ubuntu ary manontany anao aho - ary manantena aho fa hamaly ireo fanontaniana rehetra ireo ianao - mieritreritra ve ianao fa ampy ny valiny azon'i JulioSAO? Moa ve izany fanajana angatahinao amin'ny mpampiasa Ubuntu mendrika izany? Moa ve tsy hisotro ireo mpampiasa pro-Ubuntu, mifangaro, manaja ihany koa? Tsy te hilaza aho fa ny mpampiasa Ubuntu rehetra dia mandrangitra sy / na tsy mahalala fomba, satria tsy ronono ratsy daholo, soa ihany. Tsy ny mpampiasa Ubuntu ihany no manana an'io karazana fitondran-tena io, satria ny mpampiasa sasany ny distros hafa dia mitovy fitondran-tena. Ahoana no ahafahanao mangataka fanajana ho an'ny mpampiasa sasany raha ny olona toa ny msx dia mandray izany aminy, tena mandaitra, mba hamoronana laza ho "mpiady" ho an'ny pro-Ubuntu - na dia tsy mpampiasa Ubuntu aza izy- amin'ny fanaovana fanehoan-kevitra mandrangitra? ( https://blog.desdelinux.net/alienware-se-monta-en-el-carro-de-ubuntu/#comment-45515 ). Amin'ireto tranga roa ireto dia tsy misy dikany ny fanehoan-kevitr'izy ireo, satria avy eo ahoana no ahafahan'izy ireo manome ny fanohanany voalohany amin'ny fangatahana fanajana raha toa ka amin'ny fotoana fohy natolotra azy ireo dia mandefa, ny voalohany, valiny tsy mahalala fomba ary amin'ny tranga faharoa, a fihantsiana? Araka ny ho hitanao dia tsy mila milentika lalina akory aho mba haneho aminao olona roa izay manohana ny fangatahanao fanajana nefa tsy vonona hanaja.
Misy ve ny vahaolana momba an'io ...? Mazava ho azy fa misy. Antsoina hoe MAOTRA. Na izany aza, ary indrisy, ireo dinika sy bilaogy amin'izao fotoana izao amin'ny fikatsahany laza, fisalasalana, tsy fitandremana, fahatokisana, ary / na satria miteraka vola ny fitsidihana ny tranonkalany, dia aza atao antonony daholo ireo fanehoan-kevitra manafintohina ireo, tsy mifanaraka amin'ny toerana na tsy manome na inona na inona . Midika ve ny famerana ny fahalalahana maneho hevitra? Tsia tompoko. Izy io dia momba ny fandraisana anjara sy ny ady hevitra ary ny fanomezana hevitra, fa ao anatin'ny lamina filaharana napetraky ny lalàna. Androany tsy misy dikany amin'ny bilaogy rehetra izany - farafaharatsiny amin'ireo fantatro, anisan'izany ity iray ity - ary amin'ny iray hafa, fanta-daza, tsy hoe tsy antonony fa mampiroborobo ny "ady afo" aza hiteraka fifamoivoizana be dia be.
Noho izany, ry Zironid malalako, ity antso ho amin'ny fitondran-tena tsara nataonao ity dia tena tsara, saingy tsy tokony hoferana fotsiny amin'ny fangatahana "ho tonga saina" amin'ireo mpampiasa izany (ny ohatra ao @ alto al fuego miaraka amin'i Ubuntu sy @msx dia santionany izay antso ho tonga saina dia tsy ampy), tokony halefa amin'ireo mpitantana rehetra na ireo tompon'andraikitra amin'ny forum na bilaogy ihany koa izy ireo mba tsy avelany na avelan'izy ireo na hanome ny hevitra mandrangitra, maniratsira, tsy mendrika na tsy mandray anjara na inona na inona.
Iza no nametraka ny lakolosy tamin'ny saka?
Mizara ny hevitrao aho, na dia mieritreritra aza aho fa ny fanaraha-maso dia manakana ny zavatra tsy ho re fotsiny, tsy manakana azy ireo izany.
Raha ny momba ny JulySAO, eny, toa hitako fa lasa ny msx, ary somary kelikely ihany.
Ampiasao ohatra i Ubuntu, satria io no tena notafihiko indrindra, ary ny hevitra dia mizara ny hevitro manokana, saingy azo ampiharina amin'ny windows, mac, na, raha tsy mandeha lavitra loatra, arch, fedora, debian, gentoo sns sns sns…
Mikasika ny fanontaniana farany dia heveriko fa tokony hanaja izy ireo, saingy tsy dia afaka manao zavatra hanovana azy ireo aho. Amin'ity lahatsoratra ity dia tsy tiako hisy olona hanova ny sainy, nataoko izany mba handraisan'ny olona mitovy hevitra ahy. Araka ny hitanao, amin'ny fanehoan-kevitra dia ahitanao ireo olona manohana ny fikasan'ny paositra sy ireo olona tsy mankasitraka.
Miaina ary avelao hiaina .. !! hehe 😎
Toledo dia troll anti-Ubuntero taloha, fa tsy miresaka momba izay tiany, dia aleony mitsikera an'i Ubuntu.
Raha tsy tianao ny Ubuntu, Windows Vista, na saosy mafana, FINE.
Atsaharo ny mimenomenona ary mandroso.
msx: Ny hany zavatra ataonao amin'ny fanehoan-kevitrao dia ny mampiseho fa marina aho, satria tsy miady hevitra amin'ny hevitro amin'ny fanjohian-kevitrao ianao, fa aleonao kosa mampiasa adihevitra hom homenen mba hanilihana ahy. Raha diso aho dia lazao amiko ny misy ahy, raha tsy izany dia aza atao hoe troll mora loatra aho.
Na izany aza, noho ny lesoka nataonao dia mila manome anao antony vitsivitsy aho: tsy troll aho, fa anti-ubuntero aho-izay tsy mitovy amin'ny anti-ubuntu-. Eny tompoko, ekeko izany, tohina aho amin'ireo lohahevitr'ireo valinteny natokana 120 hanehoana ny hakanton'ny endrika vaovao amin'ny haingon-trano, izay ny maha samy hafa azy dia ny feo somary maizina kokoa ary mihodina 180 degre, avy Ubuntu; Halako ireo lohahevitra ireo, miaraka amin'ny valiny 96, milaza fa ny bira fisakafoanana eo anilan'ny sary Facebook vaovao dia kopian'ny Unity tsy mendrika; Tsy tiako ny lohahevitra natokana ho an'ny KDE, ohatra, niafara tamin'ny fakàna an-keriny satria amin'ny valiny 67… 53 dia milaza fotsiny fa mahazo aina amin'ny Unity izy ireo.
Eny msx, anti-ubuntero aho satria julioSAO, tsy mendrika valinteny mahery setra sy tsy mahalala fomba avy amina olona manandrana "miaro" an'i Ubuntu izy. Sa izany no eritreritrao?
Tsy misy msx, aza afangaro ny zavatra sy ny hevitra, tsy fanoherana ny Ubuntu aho - raha nandinika kokoa ianao dia ho hitanao fa mpampiasa Ubuntu aho- saingy tsy tiako mihitsy izy ireo, ary tsy ho tiako mihitsy izy ireo, ny fomban'ny maro - tsy izany rehetra izany, tiako ny hamela azy mazava tsara, mpampiasa Ubuntu mafy.
Minoa ahy, manana fiainana izy ... azoko lazaina fa matihanina kokoa noho ny ankamaroan'ny olona eto 😀
Ahoana ny fomba hiresahany ny zavatra tiany? ny tena zava-dehibe dia ny ampahany amin'ny tiana sy ny tsy tiana .. raha misy zavatra tsy tiana bebe kokoa satria ny marimaritra iraisana ankapobeny dia shit! tsotra izany
INONA NO ANTONY !! Tiako foana ny hevitry ny linux hatramin'ny nahitako azy, nanomboka tamin'ny redhat aho, avy eo tamin'ny debian ary avy eo tsy nisy namoaka ahy, saingy indrisy tsy afaka nanala windows tanteraka aho mandra-pahatongako tany ubuntu ... tsy maintsy ekena fa ny ubuntu dia nanokatra tsy misy farany ny azo atao ary ny zavatra manan-danja indrindra nampahafantarina ary nanomboka teo dia nihatsara ny zava-drehetra…. izao dia tsy tiako ny alehan'ny ubuntu, ary misaotra an 'Andriamanitra aho fa efa nijanona i Kubuntu ... satria tsy mametraka tanana canonika dia mandeha tsara kokoa hahahaha, ary izay no ampiasaiko .... fa tsy maintsy manao ny marina isika ary misaotra an'i ubuntu tamin'ny zavatra rehetra nomeny an'ity rafitra fiasa ity…. Ho debianero foana aho ... na avy amin'ny derivatives mazava ho azy 😉
"Tsy maivana ny Ubuntu, tsy havaozina i Debian, voan'afo ny Arch, miadana ny Fedora, Suse novell ary ratsy tarehy, Mint no Ubuntu miery ..." Ho an'ireo fitarainana, loko sy tsiro.
Mahaliana ny zavatra lazainao, saingy heveriko fa misy mahaliana koa nefa:
Ampidiro amin'ny fomba mandroso ny Ubuntu.
Miaraka amin'i Debian dia miankina amin'ny sampana izany,
Tsy miady hevitra momba ny Arch aho;
miaraka amin'ny Fedora dia miankina amin'ny tontolo iainana ihany koa izy io, na dia azo antoka aza fa tsy maivana toy ny disto hafa
Heveriko fa i Novell no ratsy tarehy, satria izany no dikan'ny Chameleon, ny endrika ivelany.
Ary azo antoka fa ny Mint dia Ubuntu miova endrika.
Carlos Carcamo dia hoy izy:
Ho an'ny tsara vintana dia nanomboka tamin'ny debian aho! ary tsy afaka nanao safidy tsara kokoa aho !!!
Indray mandeha ihany no nametraka ubuntu tao amin'ny pc an'ny sakaizako, satria tsy naniry ny ho anisan'ireo mpampiasa an'io distro io mihitsy aho! izaho manokana tsy dia tiako loatra ny ubuntu, ary miaraka amin'ny firaisankina dia tiako kokoa aza !!!
Marina ny fanajana, ny distro rehetra manampy amin'ny fampiroboroboana rindrambaiko maimaimpoana dia mendrika hajaina, tsy misy isalasalana izany.
Valiny tamin'i Carlos Cárcamo
Raha izany no izy, raha mampiasa chromium aho, ity tranonkala ity dia milaza fa eo ambanin'ny Ubuntu aho, fa rehefa mampiasa iceweasel aho dia neken'ny tranonkala ilay rafitra marina ampiasako izay debian hahaha! manao vazivazy amiko ve ianao? tpt
Daaallleeee, inona no ampiasainao kubuntu hahahaha
Minoa ahy ny lahatsoratra fa tsy mampiroborobo na inona na inona ireo .. araka ny nolazaiko tetsy ambony dia fanehoan-kevitra sekta fotsiny .. ary hadalana ihany koa fa ny fiarovana distro dia raisina am-perinasa fa tsy mitady kalitao sy fitoniana aloha. Raha raisin'izy ireo ho toy ny lelafo manohitra distro izany dia tsy hihatsara velively izy ireo ary hikatsaka ny hamita-tena fotsiny manoloana ny zava-misy fa amin'ity Ubuntu ity dia tsy distro tsara.
Ny zavatra hafa dia amin'ny ankamaroan'ny tranga ireo izay mieritreritra momba ny lelafo lazaina dia mpampiasa layer 8 fa tsy misy zavatra hafa
Tsy nisy tsara noho izany hoy. tehaka.
Eny, araka ny nolazaiko tao amin'ny fidirana dia tsy tiako koa ny Ubuntu. Milaza fotsiny aho fa tokony hanao distro toy ny ataontsika amin'ny vehivavy. Misy vehivavy tiako ary ny hafa tsy tiako, ary misy vehivavy tsy tiako ary ny hafa, ary tsy manomboka miteny aminy (na tsy tokony) zavatra toy ny "mahatsiravina izy", satria izy ireo hevitra manokana fa tsy fahamarinana tanteraka.
Salama namana. Amin'ny maha mpampiasa Ubuntu ahy dia tiako be ny hevitrao. Mazava ho azy fa manaraka andalana hafa amin'ny hafa i Ubuntu, angamba ara-barotra kokoa nefa linux ihany io. Mety mila Unity bebe kokoa isika na kely aza, fa io interface io dia azo ovaina amin'ny hafa an'arivony, ohatra. Amin'izao fotoana izao dia manoratra amin'ny Windows 8 aho ary ity no tiako na tsy (tsy dia tiako loatra fa mba hitsikerana ny "fahavalo" dia tokony ho fantatrao ny ankamaroany) Na eo aza izany, inona no nolazaiko misaotra ary andao hiaraka amin'ny ady tsy hisaraka. Fiarahabana.
kaspita dia hoy izy:
Izaho koa dia "nanomboka" tamin'ny Ubuntu tamin'ny 2006-2007, tsy tadidiko tsara. Napetrako tamin'ny teny nindramina ny zavatra natomboko, satria ny tena zavatra tokana nataoko tamin'izany fotoana izany dia ny fametrahana azy miaraka amin'ny dualboot miaraka amin'ny Windows XP, ary raha vao tafapetraka ary rehefa afaka roa andro nampiasana azy dia nilatsaka ny hatezerana ary niverina aho Windows.
Avy eo nomeko fotoana faharoa i Linux tamin'io toerana io ihany (dualboot miaraka amin'ny W7 sy Ubuntu 10.10). Na dia efa nampiasaiko lava aza aho tamin'ity indray mitoraka ity na dia nanolo azy tamin'ny varavarankely aza aho, fa rehefa afaka antsasaky ny taona na angamba kely kokoa noho izaho saika nampiasa Windows 7. Ary koa ho zava-baovao ho ahy, ilay fizarazaranay niaraka tamiko Ubuntu dia tsy nesoriko mihitsy, izay raha nitranga tamin'ny dingana voalohany nataoko tamin'ny Linux.
3 volana lasa izay, tamin'ny fanatsarana ny PC-ko, ary satria tsy maintsy namolavola ny zava-drehetra aho, hoy aho anakampo: Hanandrana distro hafa miaraka amin'ny Windows 8 aho, satria navesatra be ny kiana momba ny Unity.
Ny nazava tamiko dia ny hoe ny DE-ko dia ho KDE. Nisalasala fotsiny aho hoe distro inona no safidiko, raha misy miorina amin'ny Arch toa an'i Manjaro na Chakra na manandrana an'i Debian (Te hanandrana azy aho) amin'ny alàlan'ny kinova andrana (Wheezy).
Nisafidy ny debian 7 wheezy ihany aho tamin'ny farany tamin'ny fametrahana azy hatrany am-boalohany sy tamin'ny alàlan'ny terminal nanampy ny KDE farafahakeliny, ary nanampy tsikelikely ireo programa ilaina ho ahy.
Tiako be ny fahamendrehany ary ny fomba anomezany ahy ny zavatra rehetra tadiaviko, afa-tsy programa roa izay hita eo ambanin'ny varavarankely fotsiny, ary tsy miara-miasa amina divay akory izy ireo, izay herinandro vitsivitsy lasa izay dia namboariko indray ny zava-drehetra ary ankehitriny dia ' avelako irery izy nametraka Debian wheezy napetraka ary namboariko hatramin'ny faran'ny kely indrindra. Ankehitriny manana Windows 7 amin'ny alàlan'ny milina virtoaly iray aho rehefa tsy maintsy mampiasa ireo programa tsy ao amin'ny Linux ireo. Tsy misy zavatra hafa.
Ho ahy ity dia dingana iray mandroso, satria sambany aho tsy nanana fizarazaran'i Windows, ary isaky ny manenina bebe kokoa aho fa tsy nanao an'io dingana io teo aloha. Ary araka ny filazan'ny mpanoratra ny lahatsoratra, ho an'ny mpampiasa maro, anisan'izany ny tenako, i Ubuntu no dingana voalohany tamin'ny fitsapana ny Linux. Ary na te hanana ny sasany ianao na tsia, dia tena misy dikany lehibe izany ary zavatra iray izay tsy maintsy asongadino, mihoatra ny fahalalany miaraka amin'ny Unity sy ny hafa.
Mamaly an'i kaspita
Etsy an-danin'izany, zavatra mitovy amiko no mitranga amiko amin'ny mpiara-miasa avy any ambony. Amin'ny chromium ny distro dia tsy mamantatra ahy tsara, fa miaraka amin'i Iceweasel (soratako miaraka aminy ity lahatsoratra ity).
Mifanohitra tanteraka amin'ny hevitra voalaza ao amin'ilay lahatsoratra. Tsy manan-tsafidy aho afa-tsy ny hampiasa Ubuntu satria kely na tsy haiko ny mampiasa linux. Tsy dia misy dikany firy ny ankamaroanareo nanomboka tamin'ny Ubuntu ary ankehitriny dia mitantana distros hafa ... ny olana dia ilay olona izay manomboka amin'ny Ubuntu afaka taona vitsivitsy dia hiditra amin'ny tontolo mihidy izay hamatotra azy indray toy ny fandresena na koa ratsy kokoa, karazana Mac. Raha ny hevitro, Canonical dia nanararaotra ny asa sy ny ezaka nataon'ny hafa ary miaina amin'ny fankasitrahana diso hevitra izay asehonao izao. Ny tsy faniriana hahita ireo famantarana miharihary amin'ity fanovana sanda ity dia manome henatra ahy hamaky azy io amin'ny maro ...
Ireo eo alohako dia mpanohitra ahy, akaiky ahy ny fahavaloko, ao amin'ny antoko misy ahy - Winston Churchill
Heveriko fa hanombohana azy dia tsy ny ubuntu ihany no soloina safidy (toy ny angano io), ary koa ny Fedora sy ny mandriva dia safidy tsara hanombohana mampiasa linux.
Nametraka azy i Fedora andro vitsy lasa izay, mora be izy io, ary ny gnome3 manokana dia mora ampiasaina kokoa noho ny firaisan-kina.
Marina fa nanomboka tamin'ny Ubuntu ihany koa aho. Tamin'izany fotoana izany aho dia nitady izay hisolo ny Windows Xp sy ny masiniko, nanana PC SONY 256 RAM aho, ary niaraka tamin'ny Windows flat dia nandady aho. Ka nanoratra ny tenako sy namaky tao amin'ny forum nizara sy nanimba ny fametrahana taorian'ny fametrahana dia afaka nametraka azy ihany aho, tsy nisy olana ny làlan'ny baiko, rehefa afaka kelikely dia nihinana ireo loharano vitsivitsy izay ananan'ny PC aho, ka rehefa afaka kelikely dia efa amin'ny Debian. Heveriko fa tsy maintsy mitsikera isika amin'ny fizarana izay tsy araka ny filazan'ny lehibeny demokrasia, ny lehibeny dia noho ny mpampiasa rehetra afa-po na tsy afa-po amin'ny asany. Izaho dia eo amin'ny Opensuse Xfce amin'izao fotoana izao, ratsy tarehy araka ny voalaza, saingy tsy misy zavatra toy ny sary fanabeazana fototra sy Conky. arahabaina
Mampihomehy, tamin'ny fomba hafa no nanaovako azy noho ianao. Ny distro voalohany nataoko dia Red Hat (tsy tadidiko intsony ilay kinova), tamin'ny alàlan'ny ESWare (mbola manana ny CD sy ny boky), SUSE, openSUSE, Fedora, ary farany, roa herinandro lasa izay, dia niafara aho amin'ny Ubuntu.
Ny antony mahatonga an'i Ubuntu fa tsy hifikitra amin'ny hafa dia tsotra be. Ny fandrosoana amin'ity fizarana ity dia mahatahotra, Canonical dia manao asa tsara, araka ny hevitro. Mamorona OS tena izy ianao mendrika ny ho tena fifaninanana Mandresy sy Mac, ary io indrindra no ilain'ny tsenan'ny solosaina. Afaka nanohy aho, fa tsy te-hitatra.
Nanomboka tamin'ny Ubuntu ihany koa aho .. Taty aoriana dia nandalo distros toy ny tsiro samihafa an'ny Ubuntu, Debian, openSUSE, Mint, CentOS, sns ... Tamin'ny farany dia gaga tamin'ny distros .rpm ary nijanona tao amin'ny CentOS 6.4 teo amin'ny mpizara nanolo an'i Debian sy teo amin'ny birao sy kahie nijanona niaraka tamin'i Fedora 18: D. Tao amin'ny CentOS sy Fedora dia nanova ny tontolo iainako avy eo Gnome ho lasa KDE (eny, amin'ny fomba madio amin'ny fametrahana vaovao) satria samy nandany zavatra mitovy izy ireo ary indray mandeha miaraka amin'ny kinova 3.6 ao amin'ny Fedora dia kivy aho amin'ny fomba iray ka tsy te hitazona ny Gnome 2 ao amin'ny CentOS akory. Koa satria hivoaka amin'ity taona ity ny RHEL 7 / CentOS 7 ary hiorina amin'ny Fedora 18 sy Gnome 3.6 na 3.8 aza (izay resahina), mankafy mivantana ny KDE aho ary tsy maintsy miaiky fa ny fampiharana ny KDE ao amin'ny Fedora kinova 4.10.1. 12.3 dia tena tsara hafainganam-pandeha sy fitoniana izay na dia amin'ny openSUSE XNUMX aza dia hitako fa par.
Heveriko fa ny iray amin'ireo zavatra tsara indrindra nataon'i Ubuntu dia ny fitondrana olona maro hanakaiky ny Linux, izay tena zava-dehibe, farafaharatsiny hanombohana. Tsy mankasitraka ny fandehanan'ny fanoherana ny Ubuntu izay nanjary be dia be aho, heveriko ho fizarana iray hafa izay tsy ratsy ho an'ny vao manomboka. Raha heveriko fa azon'izy ireo atao ny manamaivana kokoa azy dia mavesatra be izany, fa raha tsy izany dia tsara ihany.
Heveriko ihany koa ilay lahatsoratra, tsy haiko ny antony manipy loto amin'ity distro ity, fa tian'ny olona ilay izy satria tsy mampiasa azy io ary raikitra io, nandalo distros aho hatramin'ny Mandrake, Mandriva, Arch , Gentoo, sns, sns. Ary jereo eto fa mampiasa Ubuntu aho ary mahazo aina aho ary miasa ho ahy izy io, ka izany no hatsaràn'ny Linux, izay ampiasainao indrindra no tianao ary Ubuntu ho an'ny olona tsy tia zava-poana ny te hianatra.
adeplus dia hoy izy:
Lahatsoratra mahafinaritra, Zironid.
Marina ny anao. fanajana… mendrika. Izaho manokana dia namonjy ny "aiko". Mila mampiasa milina fahanterana izay tsy mahazaka xp akory aho, tsy maintsy nanao ilay zavatra iray izay "saika ny zava-drehetra" naroson'izao tontolo izao, ny 8.04. Amin'ny ankapobeny, Ubuntu dia nanome ny mpampiasa fotoana ahafahana mihaona amin'ireo distros hafa na ireo nandao azy na ireo izay mbola tsy te hampiasa azy io velively. Ary resahina ho an'ny tsara sy ho an'ny ratsy. Fa maninona no mametra ny hatsaram-pon'Andriamanitra?
Azoko ny tontolon'ny GNU / Linux amin'ny fahalalahana, anatiny sy ivelany: ao anaty, misafidy ireo fonosana ianao; mivoaka misafidy ny distro ianao. Ny ambiny dia subjectivism madio (miala tsiny amin'ny teny).
Mazava ho azy, ny fitarainana dia manaitra kokoa hatrany, ary efa namaky be dia be aho. Ny fiderana sy ny fiderana dia mifikitra sy mandehandeha. Noheveriko foana fa, amin'ny farany, tsy misy distro tsara kokoa noho ny vilany izay amboarinao amin'ny masininao. Ary amin'ny andro reraky ny fofonaina dia manova azy ... ary mifidy ny tsara indrindra hatramin'ny farany.
Mamaly an'i adeplus
Mitsikera ahy izay asehon'ny ubuntu sy ny canonical. Rindrambaiko maimaimpoana sandoka, manolotra fonosana fananana izy ireo, mampiroborobo modely fampandrosoana mikatona ary manitsakitsaka ny tsiambaratelon'ny mpampiasa ary miantsoantso hoe "ubuntu dia rindrambaiko maimaim-poana" mila mametraka "mahalala ny zonao" fotsiny izy ireo ho mpanota kokoa
Tsy nanomboka "linux" tamin'ny ubuntu aho
Nanomboka ny GNU / linux tamin'ny fampiasana ubuntu aho, ary tsy faly aho, tokony ho avy amin'ny lalana malalaka izany. Fa ny foto-kevitry ny rindrambaiko "misokatra" dia nasandratra be loatra ary hadino ny soatoavina etika amin'ny rindrambaiko maimaimpoana. mahatonga anay hanana ivon-toerana migratory ubuntu fa tsy distro maimaimpoana
Raha manana bug na tsia i Ubuntu, na raha miasa haingana na miadana izy dia tsy miraharaha izany aho, saingy te hahafantatra miaraka amina foto-pisainana izay tsy ankanesany izany kanonika izany, mba handrosoana handrosoana sy handrosoana ihany mba hamidy bebe kokoa, ho izaho dia manapotika be ny baoliko
Tsy misy fitiavana, Tsy misy fanajana, Ubuntu dia lalana izay tsy tiako aleha intsony
Tsy azoko ny fiheveran'ny ubuntu "renegade", tamin'ny fotoana nivoahan'ny ubuntu dia safidy hafa maimaim-poana izy io, satria ny fametrahana tany am-boalohany dia tsy misy ampahany fananana, tsy toy ny Knoppix (izay natomboko), Mint, na mitovy debian (hatramin'ny 5) dia nampiditra ampahany fananana ao amin'ny cd / dvd anao. Ny rindrambaiko maimaimpoana dia fivoarana iray, izay nanombohantsika rehetra nampiasa varavarankely. Ny kernel Linux dia nanomboka fameperana, avy eo nampiana lisansa GPL. Nisy fotoana iray nampiasain'ny tontolo birao malaza qt, izay fananana, avy eo navotsotra. Aleo tsy miresaka momba ny fotoana tianao handrindrana ny Gnome 3 miaraka amin'ny Mono / C #. Androany dia misy blob mihidy ao anaty kernel iray ihany ary fizarana vitsivitsy ihany no tompon'andraikitra amin'ny famoretana azy ireo, iza no mahalala rahampitso io kernel.org io ihany no hikarakara izany. Tsy nisy "lalan-kaleha" mihitsy raha tsy taona vitsivitsy lasa izay niaraka tamin'i Trisquel sy Debian 6. Ho lova tamin'ny andro taloha dia ny gentoo, ny rhel ary ny slackware izay tsy miraharaha firy ny hampisaraka ireo faritra malalaka. Tsy fantatro izay lalana tokony nalehanao malalaka kokoa, satria tsy nisy, izany no fivoarana.
«Tsy azoko ny fihetsika" renegade "an'ny ubuntu, tamin'ny fotoana nivoahan'ny ubuntu dia safidy hafa maimaimpoana io," ... ary? xD tamin'ny fotoana nihaonako taminy dia tsy afaka intsony izy, eny fa na dia ao anaty voany aza
"Tsy fantatro izay lalana tokony nalehanao malalaka, satria tsy nisy na iray aza"
Izay no tiako holazaina, raha toa ny rindrambaiko maimaimpoana niahy bebe kokoa noho ny lozisialy misokatra "open" -privative. Ka izaho sy ny mpampiasa maro dia mety ho nahafantatra fizarana maimaimpoana 100% ho fanombohana ao Gnu
"MARO amintsika no nanomboka tamin'ny GNU / Linux niaraka tamin'i Ubuntu" satria manantena aho fa tsy hanao jeneraly ianao, satria raha ratsy be io.
Etsy ankilany dia natomboko tamin'i Fedora ny eritreritro fa izany no antony tsy ahafahako mandao azy, nanandrana ny hafa aho, na dia ny Ubuntu aza, saingy tsy misy zavatra hafa tsy maharesy lahatra.
Betsaka ny zavatra nolazaiko, satria ny fametrahana isan-jato tsy azo antoka dia fahadisoana lehibe, ary, satria tena mieritreritra aho fa maro tamintsika no nanomboka teo.
Nanomboka nampiasa debian (ny tenako) ny reniko sy ny rahavaviko, saingy niadana izy, ary izao dia mampiasa openuse izy ireo. Izy ireo dia ampahany amin'ny maro hafa izay natombok'ireo distros hafa.
Zavatra iray ihany no nolazaiko, ny fahaiza-mitsikera dia tsy maintsy misy foana, satria matetika no kiana mafy izy io, mac os sy windows, tsy hitako ny antony tsy tokony hitsikerana an'i Ubuntu, indrindra satria raha ny hevitro, raha izany no izy. tsara tarehy distro amin'ny fahitana, saingy tsy manana fitoniana be.
Ubuntu, amin'ny maha-derivatives azy, dia niasa tsara foana ho ahy, amin'izao fotoana izao dia mizaha ny kinova Ubuntu-Gnome 13.04 beta 2 aho ary tsy misy fitarainana lehibe, saingy marina ihany koa fa izay nianarako tamin'ny Linux dia tokony haloako. distros hafa izay tsy dia tsotra toa an'i Ubuntu. Na izany na tsy izany dia tsy te hahalala ny fomba fiasan'ny OS foana ny mpampiasa, ary tsara ho an'io karazana mpampiasa Ubuntu io, izao aho manomboka ny Faculty izay manombatombana ny tsy fahampian'ny fotoana hitoerako, hijanona miaraka amin'i Ubuntu -Mangataha kelikely fa afaka manao ny zava-drehetra haingana kokoa aho.
Ubuntu dia nataon'ny devoly trololo 😛
Ary ankehitriny matotra ... Nampiasa Ubuntu foana aho mandra-pahatongan'ny Unity, na dia tsy nampiasa izany ho distro tokana aza aho satria nanana distros 3 na 4 napetraka niaraka tamin'ny PC-ko.
Saingy nanomboka tamin'ny Suse 9.0 aho, toa an'ireo bandy macho 😉
Ny dadatoako (ara-bakiteny, rahalahin'ny raiko) dia nampiasa slackware nandritra ny fotoana ela (misaotra azy fa fantatry ny raiko ny ubuntu ary izaho koa), fa amin'izao kosa dia mampiasa Xubuntu (apetrako izy: D) sy Kubuntu (miaraka amina windows. xd).
Wow, ho an'ny lahatsoratra fohy toy izany, firy ny hevitra ao.
Raha ny hevitro dia mahazo hype bebe kokoa noho ny tokony ho izy ny ubuntu ary, araka ny eritreritiko, dia ny tetikadin'ny tompon'ny Canonical, izany no mahatonga an'io hadalana lazainao isaky ny 3 na mihoatra io.
Amin'ny fomba fijery ara-teknika ny ubuntu dia toy ny maro amin'ireo distro hafa any, Out of the Box ary miaraka amin'ny tontolo iainany. Linux Mint, ohatra, dia mitovy (ary aza omena ahy fa Mint dia miorina amin'ny Ubuntu, satria i Ubuntu dia miorina amin'ny Debian, ny voalohany dia ao anaty fonosana voaangona ary ny iray hafa tsy).
Izaho manokana tsy tia ubuntu, fa satria tsy tiako ny Unity indrindra ary noho ny fitoniana. Ny herinandro niarahan'ny ekipa 3 samy hafa niaraka tamin'ny LTS pme tahotra lernel (10.04 dia) nanapa-kevitra ny tsy hametraka izany bebe kokoa amin'ny olona aho, tsy teo aloha. Ary fantatro koa ny maro amin'ireo pro be sy mampiasa ubuntu ka tsy dia ho an'ny vao manomboka koa izany.
Ka izay rehetra manoratra (soratanao) hitsikera ny ubuntu sy ireo ady lelafo vokatr'izany, na izay manoratra (soratanao) hidera azy noho ireo zavatra tsy mampiavaka azy ara-teknika, fa ny zavatra toa ny "nampiditra anay tamin'ny linux" na "teo mpampiasa kokoa ny ubuntu noho ny distro hafa ", eritrereto fa mandray anjara amin'ny fampielezan-kevitra amin'ny dokambarotra an-tapitrisany izay tsy nandoavana anao.
Izay ny hevitro.
Hitsahatra tsy ho rindrambaiko maimaimpoana i Ubuntu atsy ho atsy. Canonical dia tsy fikambanana tsy mitady tombombarotra na vondron'ireo mpandahatra fandaharana miady ho an'ny fahalalahana. Orinasa tadiaviny dia PROFITS. Tsy maninona na ireo tombom-barotra ireo dia avy amin'ny fitsikilovana ny mpampiasa na amin'ny fanaovana fifanarahana amin'ireo orinasa sy governemanta mpanao kolikoly hafa, na avy amin'ny hetsika hafa mandrahona ny fahalalahan'ny olona.
Izany no tokony heken'ny mpampiasa Ubuntu rehetra. Raha te hanohy hampiasa azy ianao dia avelao izy ireo hampiasa azy, raha te hiteny ianao hoe "it is the best", lazao fa farafaharatsiny mba fantaro fa misy ny tsy fitoviana kely eo amin'ny Ubuntu sy ny sisa amin'ireo fizarana manaraka ( na miezaha hanaraka arak'izay azon'izy ireo atao) ny tena fotokevitra GNU / Linux
Valiny tamin'i Franco
Inona no maharatsy ny tombom-barotra? Tsy manana karama ve ianao? Mpiasa an-tsitrapo ve ireo mpiasa kanônika? RedHat mihitsy no nilaza hoe "Tsy fikambanana mpanao asa soa izahay" folo taona lasa izay. Ny lozisialy sy ny tombom-barotra maimaimpoana dia tsy fahavalo, afaka miara-miaina izy ireo, na i Stallman aza dia nanao izany tamin'ny emacs. Mikasika ireo fiampangana ireo dia afaka milaza fotsiny aho fa tsy manana porofo ary manaja ny fitsipiky ny tsy fananan-tsiny. Ny governemanta rehetra dia manana kolikoly amin'ny lafiny sasany, ary tsy ny orinasa rindrambaiko voalohany na ihany no mifampiraharaha amin'ny governemanta.
Tsy ratsy ny karama. Ny zavatra ratsy dia ny tombony fa tsy ny fahafahan'ny mpampiasa no zava-dehibe indrindra ary satria i Stallman no iantsoanao azy dia nilaza izy fa mitsikilo ny mpampiasa i Ubuntu (ankoatry ny zavatra hafa) ary mamporisika ny tsy hametrahana azy
Csr dia hoy izy:
Eny, tsy mpampiasa manam-pahaizana aho, fa raisiko amin'ny Ubuntu, na dia afaka nanandrana distro vitsivitsy aza aho dia aleoko ity iray ity. Nametraka ny dock Cairo aho, nanamboatra compiz izay tiako aho, napetrako teo amboniny ny conky ary tiako ny fijeriny. Ny olon-tsotra toa ahy no mampiasa azy, fa tsy hoe satria te-hahatsapa ho mpijirika na zavatra toa izany isika dia fahafinaretana tsotra fotsiny ny mianatra zavatra vaovao. Esory tanteraka ny Win2 satria ny hany zavatra nampifandray ahy dia ny fako Office, izay ilaiko amin'ny asako, fa azoko atao koa ny manomboka azy amin'ny divay. Misaotra an'ireo mpampiasa marina distros sy manam-pahaizana hafa "matanjaka" hafa aho na manam-pahalalana bebe kokoa, izay nanampy ahy hamaha ny fisalasalako, tsy misy izany toe-tsaina mahatsikaiky izany izay ananan'ny mpitsikera maro eto izay saika milaza hoe "raha mampiasa Ubuntu ianao dia milay , fa raha mampiasa Arch, chakra, sns ianao dia hitombo 20 cm ny dicko. ». Ny GNU / Linux dia heveriko fa fahalalahana misafidy izay tianao, fa tsy izay apetrany aminao, noho izany tsara kokoa ny manilika ireo fitoriana izay toa korontana ataon'ny birao na ara-pivavahana miady amin'ny pelaka na amin'ny fahalalahan'ny mpanao gazety satria mampihatra ny zon'izy ireo. Soratako ho vavolom-belona ho an'ny mpampiasa tsotra fotsiny aho.
Mamaly an'i Csr
Caliche dia hoy izy:
Ity fitsikerana ity dia mety manana fikasana samy hafa, izay ahitako fahitana roa: ambarao ny tsy fahatokisanay ny fiovana tampoka izay nahatonga an'i Ubuntiu ho distro ankafizin'ny tsirairay, na araka ny filazan'ny maro, tsy ny namanao no manarona ny lesoka nataonao fa kosa hoy ianao ao tarehy mba hihatsara ianao. Alaivo an-tsaina hoe inona ireo fanavaozam-baovao Ubuntu, raha samy nanapa-kevitra ny handao ny zavatra isika satria tsy hajaina ary manantona ny lohantsika fotsiny ary avelao ny distro hianjera ao anaty hantsana izay tsy misy mpampiasa vaovao mahatsapa mahazo aina manandrana?
Ny fitsikerana, miankina amin'ny hoe iza no mandray azy, dia mety ho fitaovam-piadiana tsara indrindra handrisihana ny fanovana ilaina, na antony mahatonga ny lolom-po rehefa mandeha ny lalana, noho izany famoizam-po (miresaka an'i Ubuntu).
Valiny tamin'i Caliche
Paul daniel dia hoy izy:
Salama daholo! Miarahaba anao! Tina, tena mahaliana anao ny adihevitrao, heveriko fa ny fahatakarana no lakile ankoatr'ireo distrosan'ny linux. (very maina ny ady afo) Mampiasa ubuntu 13.04 aho izao. Toa ahy fa tsy tokony hieritreritra ianao fa tsy misy rafitra fandidiana tonga lafatra. Ny orinasa izay mampiroborobo ny ubuntu, canonical, raha ny hevitro dia nanamora ny fidirana amin'ny linux, saingy tsy izy irery, toa hitako fa ireo fizarana hafa toa ny Fedora, openuse, andohalambo, ary maro izay tsy tadidiko tao amin'ny fotoana fohy, toy ny linux mint koa Manana tanjona mitovy amin'izany izy ireo. Ny safidy dia ao amin'ny mpampiasa, mpampiasa mila solosaina hiasa, na izay ilainy, rahateo, fitaovana milina ny masinina ary ny fampahalalana tantaniny no zava-dehibe, araka ny hevitrao?
Valiny tamin'i Pablo Daniel
Fantatro fa tara aho, fa te-hanome hevitra. Nanomboka nampiasa ny GNU / Linux avy any Knoppix aho, tamin'ny taona 2003. Nanandrana an'i Mandrake, OpenSolaris, Debian, Fedora, Gentoo aho, ankoatry ny hafa. Fantatro ny Ubuntu hatramin'ny 5.04 ary tiako izany.
Avy teo aho dia nitsambikina tamin'ny hafa, fa tamin'ny farany tiako ny fampiononana omen'ny Ubuntu ahy, ary ampiasako bebe kokoa amin'izany, satria lehilahy manana fanoloran-tena maro aho, ary na dia tiako aza izany dia tsy manam-potoana firy intsony aho andramo ny tontolon'ny birao, na ny fanamafisana, na ny fanangonana zavatra (raha tsy hoe manana kaopy kafe roa aho ary tsy natory tany am-piasana ny ampitso).
Mivelona amin'ny Ubuntu aho ary efa nitory ny filazantsara sasany. Ary marina, misy fitiavako azy, na dia tsy tiako aza ny fanapahan-kevitra raisin'izy ireo. Angamba mety mangataka andro aho hiova distro, araka ny nolazaiko tetsy ambony, izao dia manana laharam-pahamehana hafa aho fa tsy handrindra azy, na dia miaiky aza aho fa mampiala voly tokoa.
Hofaranako amin'ny filazako fa tsy maintsy hajaina izy io, satria tsy ho an'ny maro, io no fidirana ho an'ity tontolo mahafinaritra rindrambaiko maimaimpoana ity sy ny fiarahamonina misy azy, fa koa satria isika izay manangana sy mampiasa azy io dia manandrana mitady fiainana marina amin'ny maha-izy azy. archero, Debianite manao. na Fedorero.
Mandeha amin'ny sariety an'i Ubuntu ny alienware